ရှမျးကိုးမီး – My Blog
ကြှနျနျော နယျမွို့လေး တဈမွို့ မှာ တာဝနျကစြပေါ့ ။ ထုံးစံ အတိုငျး ကြှနျနျောက တဈယောကျတညျးသမား မို့ ရုံးအိပျရုံးစားပဲနတေယျ ။ ရုံးမှာ ကြှနျနျော နဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ သူငယျခငျြး သီဟ ဆိုတာရှိတယျ ။ သူက တော့ အိမျထောငျသညျတဈယောကျ ။ သူ့ မိနျးမနာမညျက စုမှနျ ။ သူတို့ လကျထပျဖွဈတာ တဈနှဈနီးပါးရှိရော့မယျ ။ သူတို့ လကျထပျဖွဈတုနျးက ကြှနျနျော ပဲ အစစ အရာရာ ကူညီပေးခဲ့ရတာ ။ သီဟ ရှိတဲ့ နောကျကို စုမှနျက ခိုးရာလိုကျလာတာ ။ စစခငျြး ဆိုတော့ ဘာမှ မပွညျ့စုံ သီဟ က လညျး စုမိဆောငျးမိမရှိသေး ။ ကြှနျနျော ပဲ ရှိတာလေး တှေ ထုတျပေး ငှရေေးကွေးရေးက အစ အိမျငှား ဘို့ ကိစ်စ အဆုံး အကုနျ ကြှနျနျော ကူညီပေးခဲ့တယျ ။
နောကျပိုငျး သီဟတို့ အိမျ က ကြှနျနေျာ့ စားအိမျသောကျအိမျ ခနခန ဝငျထှကျဖွဈ တခါတလေ သီဟ နဲ့ အတူတူ သူ့တို့ အိမျမှာ ဘီယာသောကျ တခါတလေ ဘီယာသောကျရငျး ကြှနျနျောတို့ သုံးယောကျတညျး ရှမျးကိုးမီး အပြျောတမျး ရိုကျဖွဈတတျတယျ ။ တခါတလေ အခွားသူငယျခငျြးတှေ ကော လူစုံတယျ ဆိုရငျတော့ ပိုကာ ဒေါငျးဖွဈတတျတယျ ။ ငါးအိမျ ပွညျ့တယျ ဆို စုမှနျက ကြှနျနျော တို့ စားဘို့ သောကျဘို့ ပွငျဆငျပေးတယျ ။ အိမျမပွညျ့ရငျ သူကိုယျတိုငျ ဝငျရိုကျတတျတယျ ။ သူက လညျး မန်တလေးသူ ခသေူမဟုတျ ရှမျးကိုးမီး ဒိုငျကိုငျရငျ သူခညျြး နိုငျတတျတာ ။ ပိုကာတော့ ကြှနျနျော တို့ လောကျ သူမကြှမျးကငျြ ။
စုမှနျက သှကျသှကျလကျလကျ ရှိတယျ ။ ပုံစံက လူကွီး ဆိုဒျ ပေါကျတယျ ။ လူကွီးဆိုဒျ ဆိုတာ အမြိုသမီး ဝတျစုံ ရငျဖုံးတှေ ထမိနျတှေ ဝတျတတျတယျ ။ ဆံထုံးထုံးပီး မွနျမာဝတျစုံလေး ဖွငျ့ နုတျခမျး နီ ရဲရဲ လေး မြား ဆိုးထားရငျ ကွညျ့လို့ အလှနျကောငျး ။ တငျရငျကောငျကွောငျးမြား က တကယျ့မွနျမာအမြိုးသမီး တို့ရဲ့ မငျးကွီးကွိုကျ ဆိုတဲ့ပုံစံမြိုး ။ တောငျ့တယျဖွောငျ့တယျပေါ့ဗြာ ။ အသားနဲနဲတော့ ညိုတယျ ။ မွငျအောငျပွောပွရရငျ မျောဒယျလျ မငျးသမီး မိုးဟကေို တို့လိုဆိုဒျမြိုး ။
မိုးဟကေိုလောကျတော့ မခြောဘူးပေါ့ဗြာ ။ စကားပွောတာတော့ ရဲတငျးတယျ မယှကျမကွောကျတတျဘူး ။ ကြှနျနျော နဲ့ သူတို့ လငျမယား သုံးယောကျတညျး ရှိတဲ့ အခြိနျ ဆို ကြှနျနေျာ့ရှမှေ့ာတောငျ မရှောငျဘူး သူ့ယောကငြ်္ား သီဟ ပေါငျပျေါ တောငျ တကျတကျ ထိုငျပီး နတေတျတယျ ။ အနေ အထိုငျပှငျ့လငျးတယျ ။ တခါတလေ ရှမျးကိုးမီး ကစားရငျး သူ ဒိုငျပေါကျသှားတဲ့ အခါမြိုး သူယောကငြ်္ား ဒိုငျပေါကျသှားတဲ့ အခါမြိုးဆို ကြှနျနျော ရှမှေ့ာတငျ သူ့ယောကငြ်္ား ကို နုတျခမျးလေး ထိုးပေးပီး အာဘှားးးး ဆိုပီး နုတျခမျးခငျြး နမျးတတျကွသေးတယျ ။ တခါတလေ ကြှနျနျော နဲ့ သီဟ ဘီယာသောကျကွရငျ သူက ဘေးမှာ ထိုငျပီး အမွညျးခှံကြှေးတတျတယျ ။
သူယောကငြ်္ားကို ခှံကြှေး ရုံတငျမကဘူး ကြှနျနေျာ့ ကို ပါ တူလေး နဲ့ ညှပျပီး လာလာ ခှံကြှေးသေးတယျ ။ သီဟ က စကားနညျးတယျ ။ အရကျဘီယာသောကျရငျတော့ အမှောကျသောကျတာ ။ အရကျဘီယာ အလှနျကွိုကျ ။ မူးပီး အိပျပြျောသှားရငျလညျး ဘာမှ မသိတော့ဘူး ။ ဟောကျသံကယျြကယျြ တခေါခေါ ဖွငျ့ မိုးလငျးအထိ အိပျတတျတဲ့ကောငျ။ သူမြားတှေ ပွောတာ မှနျသလားတော့ မသိဘူး စကားနဲတဲ့ကောငျတှကေ စကားမြားတဲ့ မိနျးမတှေ နဲ့ ရတတျကွတယျဆိုတာ ။
တဈရကျပေါ့ ကြှနျနျောရယျသီဟရယျ စုမှနျရယျ ညဘကျသူတို့ အိမျမှာ ဘီယာသောကျရငျး ရှမျးကိုးမီး ရိုကျကွတယျ ။ woofer နဲ့ သီခငျြးအေးအေးငွိမျ့ငွိမျ့လေး ဖှငျ့ရငျး ဘီယာသောကျ ဆေးပေါ့လိပျကလေးဖှာ ဖဲထိုငျရိုကျရတာလဲ အရသာ တဈမြိုးဗြ ။ အဲ့နကေ့ ည ၇နာရီလောကျကနေ ထိုငျရိုကျလိုကျတာ တဈယောကျကို ဒိုငျ ငါးလှညျ့စီ ကိုငျကွေး ရိုကျကွတာ ၁၀ နာရီလောကျထိဘယျသူမှ ဒိုငျမပေါကျဘူး ။ ထိုးကွေး က အမြားကွီးတော့ မဟုတျဘူး ကနျ့သတျထားတယျ ။ အလှနျဆုံးထိုး ငါးထောငျထကျမပိုကွေး ။ ဒါပမေယျ့ ငါးထောငျထကျသာမပိုတာ ရှုံးလိုကျရငျ တခါတခါ နှဈသိနျးသုံးသိနျးလောကျထိ ရှုံးတယျ ။
ကြှနျနျော လညျး ရှုံးဖူးသလို သူတို့လညျး ရှုံးကွတယျ ။ ကြှနျနျောနိုငျရငျတော့ ကြှနျနျော က တဈဝကျလောကျ သူတို့ကိုပွနျပေးတတျတယျ ။ စီးပှားဖွဈ ကစားတာ မဟုတျလို့ အမြားကွီးလညျး မနိုငျခငျြသလို အမြားကွီးလဲ မရှုံးခငျြဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က နှဈယောကျဆိုတော့ ကြှနျနျောခညျြး ရှုံးတာ မြားတယျ။ ၁၀ နာရီ ကြျောကြျော လောကျမှ ကြှနျနျော ဒိုငျစပေါကျပါလရေော .ငါးသောငျး ကြျောလောကျ နိုငျလိုကျတယျ ။အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့က မကနြေပျလို့ လိုကျထိုး ကြှနျနျော က ဖွေးဖွေး ထိုး နဲ့ ၁၁ လောကျ မှ သူတို့ တဈယောကျ တဈသိနျးလောကျ ရှုံးသှားတယျ ။ ဟိုကောငျ သီဟ ကလဲ ရှမျးကိုးမီးရှုံး ဘီယာသောကျ နဲ့ သူတဈယောကျတညျး ဘီယာ ငါးလုံးလောကျ ကုနျသှားတယျ ။ နောကျဆုံး ၁၁ခှဲလောကျကတြော့ သီဟ တို့ တိုကျပှဲကပြီ ။
မငျးတို့ ဆကျကစားခငျြကစားကှာ ငါတော့ အိပျပီ..ဂေ့ ..ဂေ့ ဆိုပီး ဖဲဝိုငျးဘေးတငျ ထိုးအိပျတယျ ။ ဆုမှနျက ကို …အိပျခငျြ အခနျးထဲသှားအိပျ ..မှနျ ကို့ကို အိမျခနျးထဲထိ ဆှဲ မပို့နိုငျဘူး မရတော့ ဟိုကောငျ သီဟ ထံမှ ဘာစကားမှ မပွနျလာ တခေါခေါ ဖွငျ့ စပီး ဟောကျပါလရေော စုမှနျ လာ ငါတှဲ ပီး အိမျခနျးထဲ ပို့ပေးမယျ နငျတဘကျကတှဲမ ဆိုပီး သီဟကို ကြှနျနျော နဲ့စုမှနျ တဈယောကျတဘကျမ ပီး အိမျခနျးထဲ မ ပို့လိုကျတယျ ။ အိမျခနျးထဲ က စပရိနျဆိုဖာ ကွီးပျေါ ကို သုံးယောကျသား မတငျလိုကျတာ ကုတငျကွီးက ကြီ…ကနဲ အိဆငျးသှားတယျ
အားးး မိုကျတယျကှာ စပရိနျမှယေ့ာ ကွီးက အိနတော ပဲ ကောငျမလေး နဲ့မြား အိပျလိုကျရလို့ကတော့ အားးပါးးပါးး ဇိမျပဲနမေယျ ကောငျစုတျ ဒါပဲတှေးတယျ .. ငါက တှေးရုံတှေး ရတာပါဟာ ..နငျတို့က လကျတှေ့ လေ စုမှနျက ခွငျထောငျတှေ ဘာတှေ ခပြေးပီး ကြှနျနျော နဲ့ အတူတူ ဧညျ့ခနျးထဲ ဖဲဝိုငျးနရော ပွနျလာရငျး နငျလညျး လကျတှေ့ လုပျခငျြ မိနျးမယူပေါ့ဟ မယူသေးပါဘူးဟာ …ယူရငျ တဈယောကျတညျးရနမှေ မယူတော့ မိနျးကလေးတှေ အကုနျ မှနျးလို့ရသေးတယျ
ဟဲ့ဟဲ့ နငျက အကုနျလိုကျမှနျးနတော လား အမလေးးး ငါ့တောငျ အလှတျပေးရဲ့ လားမသိဘူး ဟဲ ဟဲ အာ့တာ တော့ ဆရာ စိတျထဲမှာ ပဲရှိတယျလေ ပွောမပွဘူး သတျရငျသတျပလိုကျ နငျနျော ငရဲကွီးမယျ .. ကိုယျ့သူငယျခငျြး မိနျးမကို ငရဲကွီးတော့လဲ ငရဲလေး ကို နိုငျတာပေါ့ဟာ.. ဒါနဲ့ ငါက နငျ့လိုဘျောဒီ ရှိတဲ့ မိနျးမမြိုးကွိုကျတာ မိနျးမယူရငျတောငျ နငျ့လို ဘျောဒီမြိုး ရှာယူမလို့ ဘာလို့လဲ ငါ့ဘျောဒီမြိုးကိုကွိုကျတာလဲ နငျ့လို တငျထှားထှား ရငျကားကား နဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေး နဲ့ နုတျခမျးနီ ရဲရဲလေး မြား စိုးထားရငျ အရမျးမိုကျတာ သခြောပီ နငျမှနျးနတေဲ့ အထဲငါမလှတျလောကျဘူး ပွောစမျး ဟုတျတယျမလား ဟာာ စုမှနျကလညျး နငျက ငါ့သူငယျခငျြး မိနျးမလေး ဟာ… မှနျးတောငျ တခါတလေ ပေါ့ ဟီးး ကောငျစုတျ ဖွနျး ခနဲ ကြှနျနေျာ့ ပေါငျ ကို လာရိုကျတယျ စပျသှားတာပဲဗြာ လာရိုကျတဲ့ သူ့လကျကို ဖမျးဆှဲလိုကျတယျ ။ ပီး တော့ စုမှနျကို သခြော စိုကျကွညျ့မိတယျ မူးနလေို့လား မသိ စုမှနျက အရငျထကျတောငျ ပိုလှနတေယျ ။
လာ ဆကျကစားမယျ နငျခညျြး နိုငျနတော မကနြေပျဘူး ဆိုပီး ၂ ယောကျတညျး ရှမျးကိုးမီး ဆကျကစားတာ ဖွဈခငျြတော့ ကြှနျနျော ခညျြးပဲ နိုငျပီး သူ့ ဆီက ပိုကျဆံ အားလုံးကုနျသှားတယျ ။ ကုနျပါပီဟယျ မနကျဖွနျ ဘရိတျဖတျ ဘိုးတောငျ မရှိတော့ဘူး နငျ့တို့ ဘရိတျဖတျဘိုး ငါပွနျပေးမှာပေါ့ နငျက ငါကို ညစာ နဲ့ ဧညျ့ခံထားတာပဲ ဟဲ့ အခု ငါတို့ ၂ ယောကျရှုံးတာ သုံးသိနျးလောကျ ရှိတယျဟ ဘရိတျဖတျဘိုးလောကျနဲ့ မရဘူး အောငျမာ နငျတို့ နိုငျသှားတုနျးကတော့ တခါမှ ငါ့ကို ပွနျမပေးဖူးဘူး နငျက တဈယောကျတညျးသမားလေ .. တဈယောကျတညျးသမားလညျး ဘိုကျနဲ့ပဲဟ စားခငျြသောကျခငျြသေးတာပေါ့ ဟာ သိဘူးဟာ နဲနဲ တော့ ပွနျရှဲ ခဲ့ဦး သနားစရာ မကျြလုံးလေး ဖွငျ့ စုမှနျ ကြှနျနျော ဆကျပီး စနောကျမနခေငျြတော့တာနဲ့ ကဲပါဟယျ ငါသိပါတယျ ရော့ရော့ ငါ့အရငျး နုတျပီး နငျတို့ ပိုကျဆံ အကုနျပွနျပေးတယျ အာ့ကွောငျ့ င့ါသူငယျခငျြးက ခဈြဘို့ကောငျးတာ ဆိုပီး ကြှနျနေျာ့ ပါးကို လာလိမျဆှဲတယျ
နငျ့ယောကငြ်္ားကတြော့ ခဈြဘို့ ကောငျးတယျဆိုပီး နုတျခမျးလေး တပေ့ေးတယျ ငါ့ကတြော့ ပါးလိမျဆှဲတယျ နာလိုကျတာ နငျနမျးရဲရငျနမျးလေ ဆိုပီး ကြှနျနေျာ့ရှေ့ နုတျခမျးလေး စူပီး မကျြစိလေး မှိတျရငျး သူမကျြနှာလေး ရှတေို့းလာတယျ ။ သူနဲ့ ကြှနျနေျာ့ ကွား မှာ ဖဲခပျြလေးတှနေဲ့ ဖဲခပျြလေးတှေ ခငျးထားသော စောငျပါးပါးလေး တဈခု သာခွားနားထားတယျ။ ကြှနျနေျာ့ ရှမှေ့ာ နုတျခမျးလေး စူပီး မကျြလုံးလေး မှိတျနတေဲ့ စုမှနျ ဘီယာ အရှိနျနဲ့ ရီဝနေတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ မကျြလုံး အသိစိတျတှေ ပြောကျသှားမိတယျ ။ နမျးမိတော့မလို ဖွဈသှားပီး မှ ကြှနျတျော မနမျးတော့ ပဲ သူ့ နုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို ကြှနျနေျာ့ လကျခြောငျးလေးတှေ နဲ့ ပှတျသပျလိုကျမိတယျ။
တအိမျလုံးတိတျဆိတျနတေယျ ။ အိပျခနျးတံခါး ပိတျထားလို့ အခနျးထဲက သီဟ ဟောကျသံတောငျ မကွားရ ။ ညနကျနကျ မှာ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ စုမှနျနဲ့ ကြှနျနျော ၂ ယောကျတညျး။ တဒင်ျဂ တိတျဆိတျသှားခြိနျနဲ့ စုမှနျနုတျခမျးလေး ပျေါ ကြှနျနေျာ့လကျခြောငျးလေးတှေ ရောကျရှိသှားခြိနျမှာ စုမှနျမကျြလုံးလေး ပှငျ့လာတယျ ။ နငျအရမျးလှတာပဲ စုမှနျ ငါစိတျတှေ ထိနျးမရတော့ဘူး စကား မြားမြားပွောတတျတဲ့စုမှနျ ဘာစကားမှ ထှကျမလာပဲ နုတျခမျးလေး ဟရုံသာ ပွုံးလာတယျ။ ကြှနျနေျာ့ ကို ရီဝတေဲ့ မကျြလုံးတှေ နဲ့ ကွညျ့နတေယျ ။ အမိုကျမှောငျထဲ တိုးဝငျမိတော့မလား ။ မဖွဈသေးပါဘူး ကြှနျတေျာ့ စိတျတှေ ကို ထိနျးလိုကျရငျး စုမှနျပုခုံးလေး ကို တခကျြကိုငျကာ စုမှနျ ငါပွနျတော့မယျဟာ .. စုမှနျထံမှ ဘာစကားမှ ထှကျမလာ ။
နကျဖွနျ စနနေေ့ နငျ့ယောကငြ်္ား သီဟ ဂြူတီကတြယျ မနကျ နောကျမကအြောငျ နိုးလိုကျဦး ` ကြှနျနျော စုမှနျတို့ အိမျက ထပွနျလာလိုကျတယျ ။ အိမျတံခါးနားအထိ ဘာစကားမှ မပွောပဲ စုမှနျ လိုကျပို့တယျ ။ လကျပတျနာရီကို ကွညျ့လိုကျတော့ ည ၁ နာရီတောငျ ထိုးနပေီ ။ ကြှနျနေျာ့ ဆိုငျကယျလေး ပျေါ တကျခှပီး ကြှနျနေျာ့ ရုံးရှိရာဆီသို့ ထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ ။ ရငျထဲ မှာ ဗလောငျဆူနတေဲ့ ရငျခုနျသံတှကေို ရုံးရောကျတော့ ရခေဲသတ်ေတာ ထဲက ရခေဲရေ ဘူး ကို မော့သောကျလိုကျတာတောငျ ပြောကျမသှား … အားး စုမှနျရယျ … ဘယျလို လုပျရပါ့မလဲ ။။
မနကျသုံးနာရီလောကျထိ ဟိုတှေးဒီတှေး ဖွငျ့ အိပျမပြျော နောကျဆုံး စုမှနျကို မှနျးပီး တဈခြီလောကျ စိတျဖွလေိုကျမှ ပဲ မကျြလုံးတှေ လေးလံပီး အိပျပြျောသှားတော့တယျ။ နောကျနေ့ မနကျ ၁၀ နာရီလောကျ မှ နိုးတယျ ။ ရမေိုးခြိုးပီး အပွငျထှကျဘို့ လုပျရငျး ရုံးခနျးထဲ တဈခကျြလှမျးကွညျ့တော့ ဟိုကောငျ သီဟ က နလေ့ညျစာတောငျ ဆှဲနပေီ။ ဟကေ့ောငျ သီဟ ငါ အပွငျ ဒိုးလိုကျဦးမယျ ဘာမှာဦးမလဲ အေး အတျောပဲဟ ငါ့ အိမျတခကျြဝငျပေးပါဦး ခုလေး ပဲ စုမှနျ ထမငျးခြိုငျ့ လာပို့ ပီး ပွနျ သှားတာ အိမျသော့ ငါ့စားပှဲပျေါ ကနျြခဲ့လို့ အာကှာ .. မငျး အိမျကို တပတျကွီး ပတျရဦးမယျ ငါ ဘရိတျဖတျတောငျ မစားရသေးဘူး အခုဝါးတီးသှားဆှဲ မလို့ဟလုပျပါသယျရငျးရာ မငျးဆာရငျ အိမျမှာပဲ စားသှားလိုကျပေါ့ ငါ စုမှနျဆီ ဖုနျးဆကျထားလိုကျမယျ ပီးရောကှာ .. ပေးသော့ ဒိုးပီ… ကြှနျနေျာ့ ရဲ့ စီးတျောမွငျ့းဟှနျဒါ ဆိုငျကယျလေး ပျေါ တကျခှပီး စုမှနျတို့ အိမျဘကျ ထှကျလာလိုကျတယျ ။။
အိမျဝ မှာ ငုတျတုတျလေး ထိုငျနတေဲ့ စုမှနျ ကြှနျနျော လာတာ တှေ့ တော့ ပွုံးပီး ထလာတယျ။ နငျကလဲ ကွာလိုကျတာ ဆိုငျကယျဆီဝငျဖွညျ့နလေို့ဟ ဘိုကျတောငျဆာနပေီ ဘာစားစရာရှိလဲရှိတယျ စိတျကွိုကျစား ကြှေးပါ့မယျတတယျ စိတျကွိုကျစားရမှလား နငျက ကော ကြှေးခငျြရဲ့လား စုမှနျ ဘာအထာ ပေါကျသှားသညျမသိ ကြှနျနေျာ့ ကို စူးစူးရဲရဲ တခကျြလှမျးကွညျ့တယျ ။ ပီးတော့ မှ မကျြနှာလှဲပီး ထမငျးပွောတာနျော ကောငျစုတျ ကြှနျနျော ဧညျ့ခနျး မှာထိုငျစောငျ့နလေိုကျတယျ ။ ဧညျ့ခနျးနဲ့ ထမငျးစားခနျးစားပှဲက တဆကျတညျး ဆိုတော့ စုမှနျကို လှမျးမွငျနရေတယျ ။
မွနျမာဆနျဆနျ ရငျဖုံးလေး နဲ့ ထမိနျအပွာရောငျ ဝမျးဆကျလေး ဝတျထားပီး ဆံပငျတှကေို နောကျလှနျပီး စညျးထားတဲ့ စုမှနျ။အလှတှကေ အကှအေ့ဝိုကျ အကောငျ့ အရငျ့ တှေ့ ဖွငျ့လှပနတေယျ ။နုတျခမျးမှာ လဲ နုတျခမျးနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတယျ ။ ထမိနျကို ခပျကပျြကပျြ စညျးထားပီး ခါးတိုရငျဖုံးလေး ဝတျထားတော့ တခကျြတခကျြ ဘိုကျသားလေး က အကြီနဲ့ ထမိနျကွား အဖှေးသားလေး ထှကျထှကျလာတယျ ။ တငျးရငျးနတေဲ့ တငျအစုံက လညျး အောကျခံ ပငျတီ ခြုပျရိုးကွောငျးလေး ပျေါနတေယျ ။ ကြှနျနျော အတှကျ တကယျ ဆကျဆီ ပါပဲ။ ထမငျးစားတော့ ကြှနျနေျာ့ ဘေးမှာ ထိုငျပီး စကားတှေ တတှတျတှတျ ပွောနတေယျ ။ ဘာတှေ ပွောမှနျးသခြောမသိတော့ဘူး သူ့ ရဲ့ ရငျသားတှေ ကို စိုကျကွညျ့နတေဲ့ မကျြလုံးတှကေို လဲ သူသတိထားမိမယျ ထငျတာပဲ။
ထမငျးစားပီးတော့ အိမျရှေ့ ဧညျ့ခနျးမှာ ခန ထိုငျနတေုနျး စုမှနျက ကြှနျနေျာ့ အတှကျ အအေး တဈခှကျ ယူလာတယျ ။ အအေးခှကျလေးကို စားပှဲပျေါမှာ တငျတော့ အောကျခံခှကျအစား ဖဲခပျြလေး တဈခပျြ နဲ့ တငျပေးထားတယျ ။ အအေး သောကျဦး ရငျထဲက အပူတှေ လြော့သှားအောငျလို့ ငါက ဘယျနှယျ့ ရငျထဲက ပူရမှာတုနျး မသိဘူးလေ တခြိနျ လုံး ငါ့ကို ခိုးခိုးကွညျ့နပေီး ရငျထဲမှာ မြား ဗလောငျဆူပီး ပူနလေားလို့အံမယျနငျသိနတေယျပေါ့ .. လှလို့ကွညျ့တာပါဟာ အဲ့လို မွနျမာဆနျဆနျ ဆကျဆီမြိုး နဲ့ နငျနဲ့ အရမျးလိုကျတယျ နငျက ဘျောဒီလဲ လှတယျ နုတျခမျးနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတော့ ပို အသညျးယားစရာကောငျးတယျ ယောကငြ်္ားတှေ တကျမတျတဲ့
ပုံစံမြိုး လမွှေောကျပီ.. သောကျသောကျ အအေး နောကျတခှကျတိုကျမယျ အအေးပဲလား …ကနျြတာကော ..နငျက ဘာစားခငျြသေးလို့လဲနငျစတေနာရှိတာ စားမှာပေါ့ ဘာကြှေးခငျြလဲ စုမှနျ ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာကို သခြော စိုကျကွညျ့တယျ ။ စကားသံတိတျဆိတျသှားတယျ ငါးမိနဈလောကျကွာမယျထငျတယျ ။ တဈခုခု ကို စဉျးစားနပေုံမြိုး ။ ကြှနျနျော လညျး ရှကေ့ အအေး ခှကျကို ယူပီး တခြိုကျသောကျရငျး အမှတျတမဲ့ အအေးခှကျအောကျမှာ ခံထားတဲ့ ဖဲခပျြလေး ကို လှနျကွညျ့မိတယျ “` Heart 1 တဲ့ဗြာ ဖဲခပျြလေး ကို သူ့ ရှေ့ ကို ထိုးပေးလိုကျတယျ ။ ခနနတေော့ စုမှနျ မတျတပျရပျကာ အိမျတံခါးဆီသို့ ခပျသှကျသှကျ လြှောကျသှားပီး တံခါး ဂကျြထိုးလိုကျတယျ ။ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ဆီ ပွနျလြောကျလာပီး ထ .. မတျတပျရပျ ကြှနျနျော လညျး ကွောငျတောငျတောငျ နဲ့ ထရပျလိုကျတော့ ကြှနျနေျာ့ ကို အတငျးဖကျပီး Kissing ဆှဲပါလရေော .. ကြှနျနျော လညျး အလိုကျသငျ့ ပွနျနမျးရငျး စုမှနျ ခါးလေးကို ဖကျထားလိုကျတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ ပုခုံး ကို ဖကျပီး ပွငျးရှရှ အနမျးတှေ မပွတျပေးနတေဲ့ စုမှနျ ။သူ ယောကငြ်္ား ရှိရဲ့ သူကိုယျတိုငျလိုလားလို့လား ကြှနျနေျာ့ကို ပဲ စတေနာရှိလို့လားမသိ လောလော ဆယျတော့ ကြှနျနျော အမိုကျမှောငျထဲ ဆငျးမိလိုကျပီ။ နမျးနရေငျး နဲ့ပဲ စုမှနျ တငျပါးတှကေို ထမိနျပျေါ မှ ပှတျခပြေေးနမေိတယျ ။ စုမှနျ ရငျသားတှကေ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘကျမှာ အတငျးတှနျးကပျ ဖိမိနတေယျ ။ စုမှနျက မကျြလုံးတှေ မှိတျထားပီး ကြှနျနျော နမျးခမျးကိုသာ တှငျတှငျနမျးနတေယျ ။ ခနနတေော့ နမျးနတော ကို ရပျပီး ကြှနျနျောလညျပငျး ကို သူ့ လကျနဲ့ ခိုတှဲကာ အခနျးထဲ ပှေးချေါသှားပေး နိုငျလား
ဟဟ စမျးသလားဟ ငါဟဲ့ယောကငြ်္ား ဟု စိတျထဲမှ တှေးကာ စုမှနျ ကိုယျလုံးလေးကို မ လိုကျတယျ ။ဒူးခေါငျးအကှေး မှာ ဘယျဘကျလကျ ဇတျပိုးနားမှာ လကျတဘကျ ဖွငျ့ ဆှဲ မလိုကျတယျ ။။ အားး တျောတျော လေးတာပဲ ။ စုမှနျက ကြှနျတော့ ကို ပွုံးသလိုလို ရယျသလိုလို ဖွငျ့ကွညျ့နရေငျး ကြှနျနေျာ့ လညျပငျး မှာ လကျနှဖကျ တှဲ ခိုထားတယျ ။ စုမှနျကို ပှခြေီ့ ပီး သူတို့ လငျမယား အိပျတဲ့ အခနျးထဲက စပရိနျမှယေ့ာကွီး ဆီပျေါ အသာခပြေးလိုကျတယျ ကုတငျပျေါမှာ ပကျလကျကလေး မွနျမာဝတျစုံလေး ဖွငျ့ နုတျခမျးနီလေးတှကေ နဲနဲ ပကျြပွယျသှားပီ ။
ကြှနျနျော စုမှနျ အလှ ကို ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျရငျး ကွညျ့နမေိတယျ ဟဲ့ .. ဒီတိုငျးပဲ ကွညျ့နမှောလား နငျလိုခငျြတာယူလေ ငါပေးဘို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေီ ကြှနျနျော အကြီ နဲ့ ဘောငျးဘီ ကို ခြှတျလိုကျတယျ ကြှနျနေျာ့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေး သာ ကနျြတော့တယျ ။ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီထဲမှာ ကြှနျနျော ကောငျ က ရုနျးကနျထှကျနပေီ ဖောငျးကားပီး အပွငျကို တိုးထှကျခငျြနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ စီတီ ဘောငျးဘီပျေါ ကို စုမှနျက လကျကလေး ဖွငျ့လှမျးပှတျပေးတယျ ။ စုမှနျသခြော လကျလှမျးမှီအောငျ သူ့ အနား ကို တိုးပေးလိုကျတော့ ဘောငျးဘီ မြော့ကွိုးလေး ထဲ လကျနှိုကျပီး အောကျကို ဆှဲ ခြှတျခလြိုကျတယျ အားပါးးးး နငျလညျး တျောတျော ထှားတာပဲ မကွိုကျဘူးလား
ကွိုကျတာ မကွိုကျတာ နငျ့ အရညျအခငျြးပျေါ မူတညျတယျလေ စုမှနျက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ စိနျချေါပီလေ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးက တောငျနတေဲ့ အခြိနျ ဆို ခွောကျလကျမ ကြျောကြျော ရှိတယျ ။ လုံးပါတျတုတျတယျ ။ ကြှနျနျော့လီး ပျေါ လကျကလေး တငျပီး ပှတျပေးနတေဲ့ စုမှနျ ကို ခေါငျးကနေ အသာလေး မ ပီး လီး နား တိုးပေးလိုကျတယျ။ နုတျခမျး သားလေး ကို ကြှနျနေျာ့လကျကလေး နဲ့ပှတျပေးလိုကျတော့ စုမှနျက အလိုကျသိစှာပဲ ကြှနျနေျာ့ ဒဈဖူးလေး ကို သူ့ နုတျခမျးဖူးဖူးလေး ဖွငျ့ လာတို့တယျ ။ အိမျထောငျသညျပဲ ဒီလောကျတော့ သခြော ပွောစရာမလို ။ သိပီးသားပဲလေ ။ ဒါကွောငျ့လညျး တှငျးဟောငျးရကွေညျအေးမွသညျ ဆိုပီး ဖွဈလာတာ ပေါ့။ အခု ဆို စုမှနျက ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျလြှကျသား ကြှနျနျောက ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျလြှကျ ။ ကြှနျနျော သာ အဝတျအစားတှေ ခြှတျပီး ကိုယျလုံးတီး ဖွဈနတော စုမှနျက အဝတျတှေ အကုနျ မခြှတျရသေး ။
ကြှနျနျော တမငျ မခြှတျသေးတာ မွနျမာဆနျဆနျ အဝတျ အစားလေး ဝတျထားတဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျက ကြှနျနေျာ့ လီး ကို စုပျပေးတာ ကို ကွညျ့ခငျြတယျ အရသာခံခငျြတယျ လေ။ ကြှနျနေျာ့ လီး နဲ့ စုမှနျ နုတျခမျးသားလေးတှကေို နုတျခမျးနီဆိုးပေးသလို ပှတျပေးလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ဒဈထိပျ က အရညျကွညျ လေး နဲနဲ ထှကျလာပီး စုမှနျ နုတျခမျး ပျေါ မှာ စိုသှားတယျ ။ ခနနတေော့ စုမှနျ နုတျခမျးလေး ဟလာပီး ကြှနျတော့ လီးဒဈ တလြောကျ ကို ငုံခဲ့ပီး အထဲမှာ လြှာ ဖွငျ့ ရဈသိုငျး စုပျပေးတော့တယျ ။ လကျတဘကျက လီးခြောငျး ကို ကိုငျရငျး နောကျတဘကျက ဂှေးဥတှေ ကို အသာပှတျဆှဲရငျး လီးဒဈ ကို ငုံခဲပီး လြှာ နဲ့ ကစားတော့တယျ
အားးးး စုမှနျ ကောငျးလိုကျတာ နငျ သီဟ ကို အမွဲ စုပျပေးနကြေ ထငျတယျ ဖနျြး ခနဲ ဆို ကြှနျနေျာ့ တငျပါး ကို ရိုကျလိုကျပီး ပါးစပျထဲ မှ လီးဒဈ ကို ထုတျကာ လောလောဆယျ နငျနဲ့ ငါ့ အကွောငျးပဲ တှေး ကနျြတာတှေ မပွောနဲ့ လို့ ပွောပီး ကြှနျနေျာ့ လီးဒဈပျေါ တံတှေး တခကျြထှေးကာ လကျဖွငျ့ ဂှငျးထုပေးတယျ။ ကြှနျနေျာ့ လီး တဈခြောငျး လုံး စုမှနျ တံတှေးတှေ ဖွငျ့ ရှဲပွောငျ နတေယျ ။ ကြှနျနျော စုမှနျ ခေါငျးကို ကိုငျကာ ကြှနျနေျာ့ လီးကို သူ့ နုတျခမျးနား ပွနျတပေ့ေးလိုကျတယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ဒီတခါ လီးဒဈ ထိပျတငျ မဟုတျတော့ပဲ လီး တဈခြောငျးလုံးကိုပါးစပျထဲ ထညျ့ပီး လှတေော့တယျ အားးးး ကောငျးတယျ စုမှနျ …အားးး စုပျစုပျ စုမှနျ ခေါငျးကို ကိုငျပီး ကြှနျနျော စုမှနျပါးစပျ ကို စောကျဖုတျလိုးသလို စောငျ့စောငျ့ လိုးပေးနမေိတယျ ။
စုမှနျ ရဲ့ စုပျ ခကျြတှကေ လညျး တဖွညျးဖွညျး ကွမျးလာတယျ ။ တခကျြတခကျြ လီး က အဆုံးထိ ဝငျသှားပီး ဟိုးး အာခေါငျထဲက အာသီးခေါငျးနား ထိ သှားသှားထောကျတယျ ။ ဆယျငါးမိနဈလောကျစုပျပေးပီး စုမှနျ ပါးစပျထဲက လီး ကို ဆှဲ ထုတျလိုကျတယျ ။ လီးတဈခြောငျး လုံး စုမှနျသရတှေေ ပပှေလို့ ။လီးကွီးကလညျး တစပျစပျ တုနျနတေယျ ။ စုမှနျ အဝတျတှေ ခြှတျလိုကျတော့ နငျ အဝတျတှေ ခြှတျနတော ကို ကွညျ့ဖူးခငျြတယျ
အငျးးး စုမှနျက ကုတငျပျေါမှ ဆငျးပီး ကြှနျနျော က ကုတငျပျေါ မှာ ထိုငျလိုကျရငျး လီးကို လကျတဘကျဖွငျ့ ဂှငျး သာသာ တိုကျနလေိုကျတယျ ။ စုမှနျက အရငျဆုံး ရငျဖုံး အကြီ ကွယျသီးလေး တှဖွေုတျတယျ ပီးတော့ ရငျဖုံး အကြီ ကို ခှာခလြိုကျတော့ အတှငျး မှ အပွာနုရောငျဘျောလီလေး ထှကျလာတယျ ။တငျးရငျးနတေဲ့ နို့အုံကွီး က ဘျောလီကွားမှ လြံကခြငျြသယောငျယောငျ ။ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ဘကျကို ကြောပေးကာ ထမိနျ အထကျဆငျစ လေး ကို ဖွပေီး ထမိနျ အပွာရောငျလေး အား ကှငျးလုံးခြှတျခလြိုကျတယျ ။ မွငျရတဲ့ မွငျကှငျးက လီး ကို ပိုတောငျလာစမေိတယျ ။ အပွာနုရောငျ ပငျတီလေး ပဲ ဝတျထားတယျ အပျေါ အောကျ ဝမျးဆကျ။ တငျသားကွီး တှကေ ပငျတီ အပွာနုရောငျလေး အောကျမှာ တငျးတငျး ရငျးရငျး ။ အရမျး မတုတျသော ခါးလေး ရဲ့အောကျမှာ တငျသားတှေ က နောကျဖကျကိုပါ ကော့နတေယျ။
ဘျောလီ ခြိတျလေး ကို လကျနောကျပွနျ ပီး ဖွုတျလိုကျတယျ ။ ပီးတော့ ပငျတီလေး ကို မြော့ကွိုးလေးမှ ဆှဲ ကာ အောကျကို လိပျခြှတျလိုကျတော့ ဖငျကုနျးသလို ဖွဈသှားပီး နောကျဘကျကို စောကျဖုတျကွီးက ပွူထှကျလာတယျ ။ ပီးတော့ မတျမတျ ပွနျရပျရငျး ကြှနျနျော ဘကျကို လညျပွနျကွညျ့လိုကျတယျ ။ မန်တလေး သူ စုမှနျရဲ့ စကိုငျးအိုးဂဈတာ ရှိတျကွီးက ကြှနျနေျာ့ လီး ကို ပိုတောငျစတေယျ ။ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျက လီးကို ကိုငျထားရငျး ညာဘကျလကျနဲ့ သူ့တငျပါး ကို လှမျးကိုငျတော့ ကြှနျနျော မှီအောငျ နောကျကို တလှမျး ဆုတျပေးတယျ ။ တငျပါးမှာ မှေးညှငျးလေး တှေ ပေါကျနတော သခြောကွညျ့မှမွငျရနိုငျပီး တခြို့ နရောလေးတှမှော တငျပါးကွောလေး တှေ ပွတျနတောတှလေို့ကျတယျ ။ စုမှနျရယျ လှလိုကျတာ တလုံးတခဲကွီးပဲကှာ ကွိုကျတယျ နငျကနြေပျအောငျနပေေးမယျ ငါကိုလညျး ကနြေပျအောငျ နပေေးရမယျနျော အငျး စိတျခြ ..
ကြှနျနေျာ့ဘကျကို လှညျ့လာကာ ကုတငျပျေါမှာ ခွထေောကျတှဲလောငျးခထြိုငျထားတဲ့ ကြှနျနေျာ့ ပေါငျပျေါ သူ့ တငျပါးကွီး နဲက တကျထိုငျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လညျပငျး ကို အသာ လာဖကျပီး ကြှနျနေျာ့လီး ကို စုပျထားလို့ စိုစိစိ ဖွဈနတေဲ့ သူ့နုတျခမျးနဲ့ ကြှနျနေျာ့ နုတျခမျးတှေ ကို လာနမျးတော့တယျ ။ မနျးမွို့တျော ပေါကျစီ ထကျကွီး သော သူ့ နို့အုံကွီးတှေ ထိပျက ညို မဲမဲ နို့သီးခေါငျးက မကွီးမသေး ။နို့သီးခေါငျး ဘေးမှာ အမှေးလေး နှဈမြှငျသုံးမြှငျလောကျ နှဈဘကျလုံးပေါကျနတောတှလေို့ကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လညျပငျး ကို ဖကျထားတဲ့ လကျတဘကျက အောကျကို ရောကျလာပီး ကြှနျနေျာ့ လီး ကို ပှတျကိုငျပေးနတေော့တယျ ။
အခုအခြိနျ ထိ စုမှနျ စောကျဖုတျကို ကြှနျနျော မကိုငျရသေးဘူး ။ နို့ အုံကွီးတှေ ကို နယျနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျကို အောကျလြောဆငျးကာ စုမှနျ ပေါငျသားလေးတှေ က နေ တဆငျ့ ဖွေးဖွေး ခငျြ ပှတျရငျး နောကျဆုံးပနျးတိုငျနရော ကို သှားလိုကျတယျ ။ စုမှနျက ပေါငျလေး အသာ ဟပေးလိုကျတော့ သူ့စောကျဖုတျနရောလေး ကို စမျးမိသှားတယျ ။ အခုမှ သိလိုကျတာ စုမှနျ စောကျဖုတျမှေးတှေ ရိတျထားတာပဲ ။ အမှေးအမြှငျ တပငျမှ မရှိ။ အဖုတျ အပျေါသားလေးတှကေို ပှတျကွညျ့လိုကျတော့ ခပျကွမျးကွမျးလေး ကြှနျနျောတို့မုတျဆိတျရိတျပီး ကာစ လေး လို ဖွဈနတေယျ ။
စောကျဖုတျမှာ အရညျတှေ တျောတျော စို့ နပေီ ။ သူလညျး တျောတျော စိတျပါနပေုံ ရတယျ ။ စုမှနျက ကြှနျနေျာ့ ပေါငျပျေါ ဘေးတဇောငျး ထိုငျနရေမှာ ထလိုကျပီး ထိုငျနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ အပျေါမှာ ခှပီး ထိုငျလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးခြောငျးကွီးက ဘိုကျပျေါ အလြားလိုကျ လနျတငျသှားပီး သူ့စောကျဖုတျကွီး ဖွငျ့ အပွားလိုကျ ဖိထားသလို ဖွဈသှားတယျ။ကြှနျနေျာ့လကျ နှဈဘကျက သူတငျပါး တဘကျစီပျေါ ကရြောကျနပေီး ပှတျခနြေတေယျ ။ စုမှနျက သူ့ ခါးကို အားပွုကာ ကြှနျနေျာ့ လီးခြောငျးကွီး ကို သူ့ စောကျဖုတျ ဖွငျ့ အလြားလိုကျ အထကျအောကျစုနျဆနျ ပှတျဆှဲရငျး သူ့နို့သီးတှကေို သူပွနျကိုငျထားတယျ ။
အငျးးးအားးး ကောငျးတယျ အားးး ကြီ..ကြီ ကြှီးး. စပရိတျမှယေ့ာ ကုတငျကွီးမှ လညျး တကြီကြှီ အသံတှေ ထှကျလာတယျ ။ စုမှနျရဲ့ အသကျရှူသံ ပွငျးပွငျး ကိုကွားနရေတယျ ။ ကြှနျနျော တို့ ရာဂ စိတျတှေ အထှဋျအထိပျ ကို ရောကျနပေီ ။ တငျပါးတှကေို ပှတျရငျး လကျခလယျလေး ဖွငျ့ တငျပါး အကှဲကွောငျးထဲသှားကာ ပှတျဆှဲ ပီတော့ ခပျရှုံ့ရှုံ့ စအိုပေါကျလေး ကို စမျးမိတယျ အားးး ကောငျးတယျကှာ…အားးး စုမှနျ အရမျး ကောငျးနပေီ ဒါတောငျ အဖုတျထဲ လီး မသှငျးရသေးပဲ အဖုတျနဲ့ လီး ပှတျနခွေငျးသာ ရှိသေးတယျ ။ တငျပါး အကှဲကွောငျး တလြောကျ ပှတျဆှဲ ပေးနရောမှ ကြှနျနျော မခငျြ့မရဲ ဖွဈလာပီး နောကျလကျတဘကျဖွငျ့ စုမှနျ တငျပါးဆုံကွီး ကို ရိုကျလိုကျမိတယျ ဖနျြးးးး အားးးး …ဟုတျတယျကှာ … အဲ့လို ကွိုကျတယျ ကိုရယျ စုမှနျထံ မှ ညီးတှားသံတှေ ဆကျတိုကျ ပျေါလာတယျ
အားးးးကွိုကျတယျကို ..အားးး ဖနျြးးးး ဖနျြးးးးးးဖနျြးးးးး `အားးး ကောငျးတယျ ကို… စုမှနျ စိတျတအား ပါနပေီကှာ …အားးးး ဖနျြးးးး ဖနျြးးးးးးဖနျြးးးးး အားးး အားးး ကို အားးးးးကောငျးတယျကှယျ စုမှနျ ကိုယျလုံး ကို ဖကျပီး တပတျလှညျ့ ကာ စုမှနျ ကိုကုတငျပျေါ ပကျလကျ အနအေထား ထားလိုကျပီး ကြှနျနျော က ကုတငျအောကျ မှ ဒူးကို အနညျးငယျ ကှေးပီး စုမှနျ စောကျဖုတျ အ၀ မှာ လီးဒဈ ကို တလေို့ကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးတံမှာ စုမှနျရဲ့ အဖုတျ အရညျတှေ ဖွငျ့ လီးတဈခြောငျးလုံး ခြောပွောငျနတေယျ ။ အမှေးတှေ ရိတျထားတဲ့ စုမှနျ စောကျပတျလေး မှာ အကှဲကွောငျးလေးအထကျနားက အစိလေး ကို ပါသခြော မွငျနရေတယျ ။ ဘေးမှ အဖတျလေး နှဈဖတျ နဲနဲ ပွဲအာ သယောငျ ဖွဈနတေယျ ။ အဖုတျဝ မှ အရညျကွညျလေး တှေ လညျး ထှကျလို့။ မကျြလုံးလေး မှေးစငျးပီး ကြှနျနေျာ့ လီး ဝငျလာမယျ အခြိနျ ကိုမှနျးမြှျောနတေဲ့ စုမှနျ ကို ခွထေောကျ နှဈခြောငျး ကို အသာ ဆှဲမ ကာ ကြှနျနျော ပုခုံး တဘကျတခကျြ ပျေါ တငျလိုကျတယျ။
သှငျးလိုကျတော့ကှာ စုမှနျ လိုခငျြနပေီ ဆိုပီး ကြှနျနေျာ့ လီးခြောငျး ကို လှမျးကိုငျကာ သူ့အဖုတျ အ၀ တဲ့တဲ့ မှာ နှဲ့ ပေးလိုကျခြိနျ ကြှနျနျောလညျး ခန်ဒာကိုယျ ကို အောကျသို့ ဖိခလြိုကျတယျ ပလှတျ …ဘှတျ .. အားးးး ဟုတျတယျကှာ ..အားး ကိုရယျ ဇှတျ ဇှတျ ဇှပျ … ဘှတျ .. အားကောငျးတယျ ကို ဖိစောငျ့ပေး အားးး ပကျလကျလှနျလြှကျမှ ခေါငျးထောငျလာပီး သူလကျနှဈဘကျ ဖွငျ့ ကြှနျနေျာ့ ခါးကို လှမျးကိုငျကာ စောငျ့ခိုငျးတော့တယျ ။ စုမှနျစောကျပတျ က သိပျမကွပျတော့ပါ ။ အိမျထောငျသညျ မို့ နဲနဲ တော့ ခြောငျနသေညျ ။ ခြောငျနသေညျ ဆိုတာထကျ စုမှနျ စောကျရညျတှေ ထှကျနတေော့ အဝငျအထှကျက ခြောခြောခြူခြူ ဖွဈနတောလဲပါတယျ ။ အားးး စုမှနျ ကို ကိုယျလိုးနပေီးနျော အားးး ကောငျးရဲ့လားးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ကုတငျအောကျကနေ ဒူးကှေးထားရသညျမို့ သိပျ အားမပါလှ ။ စုမှနျက ကုတငျပျေါ မှာ ပကျလကျလှနျ အနအေထား ဖွဈသဖွငျ့ အောကျကို နဲနဲ နိမျ့နသေညျ။ ကြှနျနျောလညျး စုမှနျရဲ့ ခွထေောကျနှဈဘကျကို ပုခုံးပျေါ တငျကာ အောကျသို့ ဖိဖိခရြငျလိုးပေးနတေယျ ။ စုမှနျ ရဲ့ နို့ အုံတှေ ကို လညျး မှီသလောကျလှမျးလှမျးပီး လိုးနရေငျး စို့ပေးဖွဈတယျ ။
အားး ကောငျးတယျကို …အားးးး အားး စုမှနျ ကိုယျ ညောငျးလာပီကှာ ကိုယျ့ကို လေးဘကျကုနျးပေးပါလား ကိုယျ ကုတငျအောကျကနေ မတျတပျရပျပီး လုပျခငျြတယျ အငျးးးးကုနျးပေးမယျနျော စုမှနျကို ကောငျးအောငျ လိုးပေး ပကျလကျလှနျနရော မှ ထကာ စုမှနျက ကုတငျစောငျး မှာ လေးဘကျထောကျ ကုနျးလိုကျတယျ ။ အားး မိုကျတယျ .. ဘေးဘကျကုနျးလိုကျတော့ စုမှနျ ဖငျကွီး က ပိုပီး ကားထှကျလာတယျ ။ စုမှနျ ဖငျကွီး တှကေို လကျနှဈဘကျ ဖွငျ့ ပှတျလိုကျပီး ကြှနျနေျာ့ လီးတံကို ကိုငျကာ အဖုတျ ၀ မှာ လေးငါးခကျြ ဆှဲ ပှတျပဈလိုကျတယျ အားးး စုမှနျ ခါးကို လကျနှဈဘကျနဲ့ ကိုငျကာ အဖုတျထဲ လီးကို စောငျ့ထိုးသှငျးလိုကျတယျ ။ ကုတငျစောငျး မှာ လေးဘကျကုနျးပေးထားတဲက အတှကျ ကြှနျနျောက ကုတငျအောကျမှာ မတျတပျရပျထားတာက စုမှနျ အဖုတျနဲ့ ကြှနျနေျာ့လီးတံ တတနျးထဲ ဖွဈနတေယျ ။ဒူးကှေးစရာ မလိုတော့ ပိုပီး အားရပါးရ စောငျ့လို့ရတဲ့ အခွအေနဖွေဈသှားတယျ ။
ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ အားးအားးး ရှီးးးးး အားးးး ဘှတျဘှတျ ဘှတျ အားးး ကောငျးတယျ ကို စောငျ့ ခပျကွမျးကွမျးလေး စောငျ့ပေး အငျးး ဘှတျဘှတျဘှတျ အားးး ရော့ကှာ အားးး ကြှနျနေျာ့ စောငျ့ခကျြတှကေ ပိုပိုပွငျးထနျလာတယျ ။ ကြှနျနျော စုမှနျရဲ့ နောကျကို စုပီး စညျးထားတဲ့ ဆံပငျတှေ ကို လှမျးဆှဲလိုကျတယျ ။လေးဘကျကုနျးရငျး ခေါငျးက အောကျကို ငိုကျစိုကျကနြရောမှ စုမှနျ ခေါငျးက နောကျကို လနျပီး ထောငျလာတယျ ။
မွငျးတဈကောငျကို ဇတျကွိုးကိုငျပီး စီးနရေသလို ပုံစံမြိုး ဖွဈသှားတယျ ။ အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ ..အားးအားး ဖတျ ဖတျ ဖတျ `ကြှီ ..ကြှီ ..ကြှီ အားးးအားးး ကောငျးတယျကို စောငျ့ပေး လီး အဆုံးထိ စောငျ့ထညျ့ပေး အားးးဖနျြးးးးးဖနျြးးးး စုမှနျ တငျပါးကွီးတှကေို နှဈခကျြဆငျ့ပီး ရိုကျပဈလိုကျတယျ တငျပါးမှာ နီရဲရဲ လကျခြောငျးရာမြားပငျ ပျေါ လာတယျ ။ အားးးး ကွိုကျတယျကှာ… အဲ့လိုမြိုး ကိုကွိုကျတာ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ အသံမြိုးစုံ ထှကျပျေါကာ အခနျးထဲမှာ ဆူညံနတေယျ ။ စုမှနျ ကလညျး လေးဘကျကုနျးထားရာမှာ နောကျကို သူ့တငျပါးကွီး ဖွငျ့ ပွနျပွနျ စောငျ့ပေးနတေယျ ။
အားးး ကောငျးတယျကှာ စုမှနျ ကို ကွမျးပေး ခပျကွမျးကွမျး လိုးပေးတာ ခံခငျြတယျကှာ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဖနျြးးးးဖနျြးးးးဖနျြးးးးးအားးး ကောငျးတယျ ….ရိုကျပါ စုမှနျကို ရိုကျပါ အားးးဖနျြးးးးဖနျြးးးဖနျြး စုမှနျ တငျပါးကွီးတှရေဲစပျနပေီ ကြှနျတေျာ့ ရိုကျခကျြတှကေ လညျး ပွငျးလာသလို ကြှနျနေျာ့ လီးဖွငျ့စောငျ့ခကျြတှကေလညျး သှကျလာတယျ ။ ကြှနျနျော စုမှနျ စကျပတျ အတှငျး မှ လီး တံကို ခြှတျကာ ကုတငျအောကျ မှာ ဒူးထောကျလိုကျတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာ နဲ့ စုမှနျ စောကျဖုတျ နဲ့ တနျးနတေဲ့ အနအေထား ရောကျသှားတယျ ။ စောကျရညျတှေ ထှကျနတော ပေါငျကိုတောငျ စီးကနြပေီ ။ ဖငျနှဈခွငျးကွားမှ စအိုဝ မဲမဲ လေး ကို လညျး မပျေါတပျေါ တှလေို့ကျတယျ ။ ဖငျနှဈခွမျး ကွီးမား တာကွောငျ့ စအိုဝ က ကွားမှာ သိပျမပျေါလှ ။ စောကျပတျ မှာ လိုးထားတဲ့ အရှိနျကွောငျ့ ပွဲအာ နတော စောကျခေါငျးသား နီရဲရဲ ကိုပါလှမျးမွငျနရေတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လြှာ ကို ရှေ့ ထုတျလိုကျပီး စောကျဖုတျ တပွငျလုံး ကို လှမျးယကျလိုကျတယျ ။ ဖငျနှဈခွမျးကွားမှာ ကြှနျနေျာ့ နှာခေါငျးက မွုပျဝငျနပေီး ညှီစို့စို့ အနံတခု ရနတေယျ ။
စောကျဖုတျရညျ ဖနျကြိကြိ အရသာ က ကြှနျနေျာ့ လြှာ ဖြား မှ ထိတှေ့ နပေီး နှေးနတေယျ ။ကြှနျနျော စောကျဖုတျ ကို လှမျးယကျလိုကျ စောကျခေါငျး ထဲ ကို လကျညိူးလကျခလယျ နှဈခြောငျး ပူးပီး ထုတျသှငျးလုပျပေးလိုကျ လုပျပေးနလေိုကျတယျ အားးး ကောငျးတယျ ကို ယကျစမျးပါ စုမှနျ စောကျပတျကွီး ကို ယကျပဈစမျးပါ .. စုမှနျ နုတျမှ ခပျကွမျးကွမျး စကားတှေ ထှကျလာတယျ သူ အရမျးဖီလျး တကျနမှေနျး သိသာတယျ။ဖငျကွီးတဲ့ သူတှေ ရာဂ ကွီးတယျ ဆိုတာ တကယျမှနျတယျ ။ တငျပါးကွီးတဲ့ မိနျးကလေး တှကေ ခပျကွမျးကွမျး အလိုးခံရတာကို လညျး နှဈသကျကွတယျ ။
စုမှနျ စောကျပတျကွီး ကို အထကျအောကျ စုနျဆနျ ယကျပေးနတော တခကျြတခကျြ ဖငျဝမဲမဲ လေးကို လဲ လြှာဖြားလေး နဲ့ ထောကျထောကျပေးလိုကျတယျ ။ ဖငျဝ ကို လြှာဖြားလေး နဲ့ ထိလိုကျတိုငျး စုမှနျ တှနျ့ခနဲ တှနျ့ခနဲ ဖွဈသှားတာ သတိထားမိတယျ ။ ဖငျဝ ကို အယကျခံရတာ ကို ကွိုကျပုံရတယျ ။ တအငျးအငျး နှငျ့ညီးညူရငျး ဖငျကွီးက နောကျဘကျကို ကော့ကော့ လာတယျ။ ငါးမိနဈလောကျ ယကျပေးပီးကြှနျနျော မတျတပျပွနျရပျလိုကျပီး အဖုတျဝ မှာ လီး ကို ပွနျတထေ့ားလိုကျတယျ ။ စုမှနျ နောကျပွနျစောငျ့ပေးအငျးးး ကြှနျနေျာ့ လီး ကို သူ့ ခွထေောကျနှဈခြောငျးအောကျမှ လှမျးကိုငျပီး အဖုတျအ၀ ကိုလီးဒဈ လှမျးသှငျးတယျ ။ ပီးတော့ တငျပါးကွီး ကို နောကျပွနျစောငျ့လိုကျရာ ပလှတျ ခနဲ လီးတဝကျလောကျ အဖုတျထဲ ဝငျသှားတော့တယျ ။
ဖငျကွီး ကို နိမျ့လိုကျ မွငျ့လိုကျ လုပျကာ စောကျဖုတျထဲမှ လီး ကို မှမှေပေေးလိုကျ နောကျပွနျစောငျ့လိုကျဖွငျ့လုပျပေးနရော ကြှနျနျောက လကျနှဈဘကျကို ခါးမှာ ထောကျကာ လီးကို ရှေ့ ကော့ပေးထားရငျး ဇိမျယူနမေိတယျ။ အ အားးး စောငျ့စမျးပါစုမှနျရဲ့ အားး ခပျသှကျသှကျစောငျ့ပေးဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ စုမှနျက ရှကေ့ နေ စောငျ့နရေတော့ သိပျအားမပါလှ ။ စုမှနျ ထကှာ မတျတပျရပျ နံရံမှာ လကျထောကျပီး ဖငျကော့ပေးထား ကို မတျတပျရပျပီး လိုးပေးခငျြတယျ အငျးး စိတျကွိုကျလုပျ လုပျပေးမယျ ကြှနျနေျာ့ အကွိုကျဆုံး ပိုဇရှေငျပါ။ မတျတပျရပျ နံရံ မှာ လကျထောကျပီး ဖငျကော့ပေးထားခြိနျ နောကျက နေ အားရပါးရ စောငျ့ရတာ ကို ကြှနျနျော အကွိုကျဆုံးပဲ ။
အဲ့လို ပိုဇရှေငျက စုမှနျလို ဖငျကွီးတဲ့ သူတှကေို လိုးရမှ ပိုကောငျးတယျ ပို အဆငျပွတေယျ။ စုမှနျက ကြှနျနျော လိုခငျြတဲ့ ပိုဇရှေငျ အတိုငျးနပေီး မကျြနှာကို ခင်ျသွလေ့ညျပွနျလှညျ့ကွညျတယျ ။ လကျတဘကျကို နံရံမှ ခှာကာ သူ့တငျပါး ကို တဖတျဖတျ ရိုကျပွရငျး မကျြစိတဖကျ မှိတျပွလိုကျသေးတယျ ။ ကြှနျနျော အသညျးတှေ ယားလာတယျ။ ကွိုကျလားးးစုမှနျအိုးကို …အိုးလေး ကှဲသှားအောငျ မလုပျနဲ့နျောတဲ့လေ ..ကွညျ့စမျး လူကို ဘယျလောကျထိ ကလိတိတိ ပွောတတျလဲ ဆိုတာ ။ ကြှနျနျော စုမှနျ ရဲ့ နောကျမှာ နရော ယူလိုကျတယျ စုမှနျက ကြှနျနေျာ့ ထကျ အရပျ နဲနဲ ပုတာမို့ ဒူးကို အနညျးငယျကှေးလိုကျပီး စောကျပတျ အ၀ မှာ လီးတလေို့ကျတယျ ။ ပီးတော့ တငျပါး နှဈဘကျ ကို ကိုငျကာ လီးကို အဆုံးထိ ဖိသှငျးပဈလိုကျတယျ ဘှတျ…အားးးး လကျတဘကျက ပေါငျကွားထဲကို လြှို ဝငျလိုကျပီး စုမှနျ စောကျစိကိုပှတျပေးရငျ နောကျကနေ အားရပါးရ လိုးခှဲနမေိတယျ။
ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားးး ကောငျးတယျကို အားးး စောငျ့ပါ အားးး ရော့ကှာ အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဖှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ စုမှနျ ဖငျကွီး တှကေို ရိုကျလိုကျ နောကျကနေ စောငျ့လိုးလိုကျ အစိကို ပှတျပေးလိုကျ ဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျပေးနတော စုမှနျကလဲ ရှကေ့နေ ပွနျစောငျ့ ဖွငျ့ နှဈယောကျသား အပေးအယူ မြှနကွေတယျ။ ဆယျငါးမိနဈလောကျ ဆကျတိုကျ စောငျ့ပီးခြိနျမှာ ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ထဲ ကဉျြသလိုလို ဖွဈလာပီး ပီးခငျြလာတယျ အခြိနျကိုကျဆိုသလိုပဲ စုမှနျကလဲ ကို ..စုမှနျ ပီးတော့မယျ …အားးးအားးးအငျး ကိုလဲ ပီးတော့မယျ အရညျတှေ ထညျ့လိုကျမယျနျော အငျးးးအငျးးး ထညျ့လိုကျ စကျပတျ ထဲကို ထညျ့လိုကျပါ အားးးအ …အ… အားးး ထှကျကုနျပီ အားးးးးအားးး စုမှနျလညျး ထှကျကုနျပီ အားးးး အားးးး“ စုမှနျရော ကြှနျနျော ရော ပွိုငျတူ ပီး သှားပီး အားအငျ ကုနျခနျးကာ ဒူးခေါငျးတှေ ညှတျကလြာပီး ကွမျးပွငျပျေါ ခှခှေလေေး နှဈယောကျသား ကသြှားတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးတံ မှာ လညျး အရညျတှေ ရှဲစိုနပေီး စုမှနျ အဖုတျဝမှ လညျး အရညျတှေ တစိမျ့စိမျ့ အံကလြာတော့တယျ……. ပီး
ကျွန်နော် နယ်မြို့လေး တစ်မြို့ မှာ တာဝန်ကျစပေါ့ ။ ထုံးစံ အတိုင်း ကျွန်နော်က တစ်ယောက်တည်းသမား မို့ ရုံးအိပ်ရုံးစားပဲနေတယ် ။ ရုံးမှာ ကျွန်နော် နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်း သီဟ ဆိုတာရှိတယ် ။ သူက တော့ အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက် ။ သူ့ မိန်းမနာမည်က စုမွန် ။ သူတို့ လက်ထပ်ဖြစ်တာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိရော့မယ် ။ သူတို့ လက်ထပ်ဖြစ်တုန်းက ကျွန်နော် ပဲ အစစ အရာရာ ကူညီပေးခဲ့ရတာ ။ သီဟ ရှိတဲ့ နောက်ကို စုမွန်က ခိုးရာလိုက်လာတာ ။ စစချင်း ဆိုတော့ ဘာမှ မပြည့်စုံ သီဟ က လည်း စုမိဆောင်းမိမရှိသေး ။ ကျွန်နော် ပဲ ရှိတာလေး တွေ ထုတ်ပေး ငွေရေးကြေးရေးက အစ အိမ်ငှား ဘို့ ကိစ္စ အဆုံး အကုန် ကျွန်နော် ကူညီပေးခဲ့တယ် ။
နောက်ပိုင်း သီဟတို့ အိမ် က ကျွန်နော့် စားအိမ်သောက်အိမ် ခနခန ဝင်ထွက်ဖြစ် တခါတလေ သီဟ နဲ့ အတူတူ သူ့တို့ အိမ်မှာ ဘီယာသောက် တခါတလေ ဘီယာသောက်ရင်း ကျွန်နော်တို့ သုံးယောက်တည်း ရှမ်းကိုးမီး အပျော်တမ်း ရိုက်ဖြစ်တတ်တယ် ။ တခါတလေ အခြားသူငယ်ချင်းတွေ ကော လူစုံတယ် ဆိုရင်တော့ ပိုကာ ဒေါင်းဖြစ်တတ်တယ် ။ ငါးအိမ် ပြည့်တယ် ဆို စုမွန်က ကျွန်နော် တို့ စားဘို့ သောက်ဘို့ ပြင်ဆင်ပေးတယ် ။ အိမ်မပြည့်ရင် သူကိုယ်တိုင် ဝင်ရိုက်တတ်တယ် ။ သူက လည်း မန္တလေးသူ ခေသူမဟုတ် ရှမ်းကိုးမီး ဒိုင်ကိုင်ရင် သူချည်း နိုင်တတ်တာ ။ ပိုကာတော့ ကျွန်နော် တို့ လောက် သူမကျွမ်းကျင် ။
စုမွန်က သွက်သွက်လက်လက် ရှိတယ် ။ ပုံစံက လူကြီး ဆိုဒ် ပေါက်တယ် ။ လူကြီးဆိုဒ် ဆိုတာ အမျိုသမီး ဝတ်စုံ ရင်ဖုံးတွေ ထမိန်တွေ ဝတ်တတ်တယ် ။ ဆံထုံးထုံးပီး မြန်မာဝတ်စုံလေး ဖြင့် နုတ်ခမ်း နီ ရဲရဲ လေး များ ဆိုးထားရင် ကြည့်လို့ အလွန်ကောင်း ။ တင်ရင်ကောင်ကြောင်းများ က တကယ့်မြန်မာအမျိုးသမီး တို့ရဲ့ မင်းကြီးကြိုက် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ။ တောင့်တယ်ဖြောင့်တယ်ပေါ့ဗျာ ။ အသားနဲနဲတော့ ညိုတယ် ။ မြင်အောင်ပြောပြရရင် မော်ဒယ်လ် မင်းသမီး မိုးဟေကို တို့လိုဆိုဒ်မျိုး ။
မိုးဟေကိုလောက်တော့ မချောဘူးပေါ့ဗျာ ။ စကားပြောတာတော့ ရဲတင်းတယ် မယှက်မကြောက်တတ်ဘူး ။ ကျွန်နော် နဲ့ သူတို့ လင်မယား သုံးယောက်တည်း ရှိတဲ့ အချိန် ဆို ကျွန်နော့်ရှေ့မှာတောင် မရှောင်ဘူး သူ့ယောင်္ကျား သီဟ ပေါင်ပေါ် တောင် တက်တက် ထိုင်ပီး နေတတ်တယ် ။ အနေ အထိုင်ပွင့်လင်းတယ် ။ တခါတလေ ရှမ်းကိုးမီး ကစားရင်း သူ ဒိုင်ပေါက်သွားတဲ့ အခါမျိုး သူယောင်္ကျား ဒိုင်ပေါက်သွားတဲ့ အခါမျိုးဆို ကျွန်နော် ရှေ့မှာတင် သူ့ယောင်္ကျား ကို နုတ်ခမ်းလေး ထိုးပေးပီး အာဘွားးးး ဆိုပီး နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတတ်ကြသေးတယ် ။ တခါတလေ ကျွန်နော် နဲ့ သီဟ ဘီယာသောက်ကြရင် သူက ဘေးမှာ ထိုင်ပီး အမြည်းခွံကျွေးတတ်တယ် ။
သူယောင်္ကျားကို ခွံကျွေး ရုံတင်မကဘူး ကျွန်နော့် ကို ပါ တူလေး နဲ့ ညှပ်ပီး လာလာ ခွံကျွေးသေးတယ် ။ သီဟ က စကားနည်းတယ် ။ အရက်ဘီယာသောက်ရင်တော့ အမှောက်သောက်တာ ။ အရက်ဘီယာ အလွန်ကြိုက် ။ မူးပီး အိပ်ပျော်သွားရင်လည်း ဘာမှ မသိတော့ဘူး ။ ဟောက်သံကျယ်ကျယ် တခေါခေါ ဖြင့် မိုးလင်းအထိ အိပ်တတ်တဲ့ကောင်။ သူများတွေ ပြောတာ မှန်သလားတော့ မသိဘူး စကားနဲတဲ့ကောင်တွေက စကားများတဲ့ မိန်းမတွေ နဲ့ ရတတ်ကြတယ်ဆိုတာ ။
တစ်ရက်ပေါ့ ကျွန်နော်ရယ်သီဟရယ် စုမွန်ရယ် ညဘက်သူတို့ အိမ်မှာ ဘီယာသောက်ရင်း ရှမ်းကိုးမီး ရိုက်ကြတယ် ။ woofer နဲ့ သီချင်းအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဖွင့်ရင်း ဘီယာသောက် ဆေးပေါ့လိပ်ကလေးဖွာ ဖဲထိုင်ရိုက်ရတာလဲ အရသာ တစ်မျိုးဗျ ။ အဲ့နေ့က ည ၇နာရီလောက်ကနေ ထိုင်ရိုက်လိုက်တာ တစ်ယောက်ကို ဒိုင် ငါးလှည့်စီ ကိုင်ကြေး ရိုက်ကြတာ ၁၀ နာရီလောက်ထိဘယ်သူမှ ဒိုင်မပေါက်ဘူး ။ ထိုးကြေး က အများကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး ကန့်သတ်ထားတယ် ။ အလွန်ဆုံးထိုး ငါးထောင်ထက်မပိုကြေး ။ ဒါပေမယ့် ငါးထောင်ထက်သာမပိုတာ ရှုံးလိုက်ရင် တခါတခါ နှစ်သိန်းသုံးသိန်းလောက်ထိ ရှုံးတယ် ။
ကျွန်နော် လည်း ရှုံးဖူးသလို သူတို့လည်း ရှုံးကြတယ် ။ ကျွန်နော်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်နော် က တစ်ဝက်လောက် သူတို့ကိုပြန်ပေးတတ်တယ် ။ စီးပွားဖြစ် ကစားတာ မဟုတ်လို့ အများကြီးလည်း မနိုင်ချင်သလို အများကြီးလဲ မရှုံးချင်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က နှစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျွန်နော်ချည်း ရှုံးတာ များတယ်။ ၁၀ နာရီ ကျော်ကျော် လောက်မှ ကျွန်နော် ဒိုင်စပေါက်ပါလေရော .ငါးသောင်း ကျော်လောက် နိုင်လိုက်တယ် ။အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့က မကျေနပ်လို့ လိုက်ထိုး ကျွန်နော် က ဖြေးဖြေး ထိုး နဲ့ ၁၁ လောက် မှ သူတို့ တစ်ယောက် တစ်သိန်းလောက် ရှုံးသွားတယ် ။ ဟိုကောင် သီဟ ကလဲ ရှမ်းကိုးမီးရှုံး ဘီယာသောက် နဲ့ သူတစ်ယောက်တည်း ဘီယာ ငါးလုံးလောက် ကုန်သွားတယ် ။ နောက်ဆုံး ၁၁ခွဲလောက်ကျတော့ သီဟ တို့ တိုက်ပွဲကျပီ ။
မင်းတို့ ဆက်ကစားချင်ကစားကွာ ငါတော့ အိပ်ပီ..ဂေ့ ..ဂေ့ ဆိုပီး ဖဲဝိုင်းဘေးတင် ထိုးအိပ်တယ် ။ ဆုမွန်က ကို …အိပ်ချင် အခန်းထဲသွားအိပ် ..မွန် ကို့ကို အိမ်ခန်းထဲထိ ဆွဲ မပို့နိုင်ဘူး မရတော့ ဟိုကောင် သီဟ ထံမှ ဘာစကားမှ မပြန်လာ တခေါခေါ ဖြင့် စပီး ဟောက်ပါလေရော စုမွန် လာ ငါတွဲ ပီး အိမ်ခန်းထဲ ပို့ပေးမယ် နင်တဘက်ကတွဲမ ဆိုပီး သီဟကို ကျွန်နော် နဲ့စုမွန် တစ်ယောက်တဘက်မ ပီး အိမ်ခန်းထဲ မ ပို့လိုက်တယ် ။ အိမ်ခန်းထဲ က စပရိန်ဆိုဖာ ကြီးပေါ် ကို သုံးယောက်သား မတင်လိုက်တာ ကုတင်ကြီးက ကျီ…ကနဲ အိဆင်းသွားတယ်
အားးး မိုက်တယ်ကွာ စပရိန်မွေ့ယာ ကြီးက အိနေတာ ပဲ ကောင်မလေး နဲ့များ အိပ်လိုက်ရလို့ကတော့ အားးပါးးပါးး ဇိမ်ပဲနေမယ် ကောင်စုတ် ဒါပဲတွေးတယ် .. ငါက တွေးရုံတွေး ရတာပါဟာ ..နင်တို့က လက်တွေ့ လေ စုမွန်က ခြင်ထောင်တွေ ဘာတွေ ချပေးပီး ကျွန်နော် နဲ့ အတူတူ ဧည့်ခန်းထဲ ဖဲဝိုင်းနေရာ ပြန်လာရင်း နင်လည်း လက်တွေ့ လုပ်ချင် မိန်းမယူပေါ့ဟ မယူသေးပါဘူးဟာ …ယူရင် တစ်ယောက်တည်းရနေမှ မယူတော့ မိန်းကလေးတွေ အကုန် မှန်းလို့ရသေးတယ်
ဟဲ့ဟဲ့ နင်က အကုန်လိုက်မှန်းနေတာ လား အမလေးးး ငါ့တောင် အလွတ်ပေးရဲ့ လားမသိဘူး ဟဲ ဟဲ အာ့တာ တော့ ဆရာ စိတ်ထဲမှာ ပဲရှိတယ်လေ ပြောမပြဘူး သတ်ရင်သတ်ပလိုက် နင်နော် ငရဲကြီးမယ် .. ကိုယ့်သူငယ်ချင်း မိန်းမကို ငရဲကြီးတော့လဲ ငရဲလေး ကို နိုင်တာပေါ့ဟာ.. ဒါနဲ့ ငါက နင့်လိုဘော်ဒီ ရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကြိုက်တာ မိန်းမယူရင်တောင် နင့်လို ဘော်ဒီမျိုး ရှာယူမလို့ ဘာလို့လဲ ငါ့ဘော်ဒီမျိုးကိုကြိုက်တာလဲ နင့်လို တင်ထွားထွား ရင်ကားကား နဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေး နဲ့ နုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲလေး များ စိုးထားရင် အရမ်းမိုက်တာ သေချာပီ နင်မှန်းနေတဲ့ အထဲငါမလွတ်လောက်ဘူး ပြောစမ်း ဟုတ်တယ်မလား ဟာာ စုမွန်ကလည်း နင်က ငါ့သူငယ်ချင်း မိန်းမလေး ဟာ… မှန်းတောင် တခါတလေ ပေါ့ ဟီးး ကောင်စုတ် ဖြန်း ခနဲ ကျွန်နော့် ပေါင် ကို လာရိုက်တယ် စပ်သွားတာပဲဗျာ လာရိုက်တဲ့ သူ့လက်ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်တယ် ။ ပီး တော့ စုမွန်ကို သေချာ စိုက်ကြည့်မိတယ် မူးနေလို့လား မသိ စုမွန်က အရင်ထက်တောင် ပိုလှနေတယ် ။
လာ ဆက်ကစားမယ် နင်ချည်း နိုင်နေတာ မကျေနပ်ဘူး ဆိုပီး ၂ ယောက်တည်း ရှမ်းကိုးမီး ဆက်ကစားတာ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်နော် ချည်းပဲ နိုင်ပီး သူ့ ဆီက ပိုက်ဆံ အားလုံးကုန်သွားတယ် ။ ကုန်ပါပီဟယ် မနက်ဖြန် ဘရိတ်ဖတ် ဘိုးတောင် မရှိတော့ဘူး နင့်တို့ ဘရိတ်ဖတ်ဘိုး ငါပြန်ပေးမှာပေါ့ နင်က ငါကို ညစာ နဲ့ ဧည့်ခံထားတာပဲ ဟဲ့ အခု ငါတို့ ၂ ယောက်ရှုံးတာ သုံးသိန်းလောက် ရှိတယ်ဟ ဘရိတ်ဖတ်ဘိုးလောက်နဲ့ မရဘူး အောင်မာ နင်တို့ နိုင်သွားတုန်းကတော့ တခါမှ ငါ့ကို ပြန်မပေးဖူးဘူး နင်က တစ်ယောက်တည်းသမားလေ .. တစ်ယောက်တည်းသမားလည်း ဘိုက်နဲ့ပဲဟ စားချင်သောက်ချင်သေးတာပေါ့ ဟာ သိဘူးဟာ နဲနဲ တော့ ပြန်ရှဲ ခဲ့ဦး သနားစရာ မျက်လုံးလေး ဖြင့် စုမွန် ကျွန်နော် ဆက်ပီး စနောက်မနေချင်တော့တာနဲ့ ကဲပါဟယ် ငါသိပါတယ် ရော့ရော့ ငါ့အရင်း နုတ်ပီး နင်တို့ ပိုက်ဆံ အကုန်ပြန်ပေးတယ် အာ့ကြောင့် င့ါသူငယ်ချင်းက ချစ်ဘို့ကောင်းတာ ဆိုပီး ကျွန်နော့် ပါးကို လာလိမ်ဆွဲတယ်
နင့်ယောင်္ကျားကျတော့ ချစ်ဘို့ ကောင်းတယ်ဆိုပီး နုတ်ခမ်းလေး တေ့ပေးတယ် ငါ့ကျတော့ ပါးလိမ်ဆွဲတယ် နာလိုက်တာ နင်နမ်းရဲရင်နမ်းလေ ဆိုပီး ကျွန်နော့်ရှေ့ နုတ်ခမ်းလေး စူပီး မျက်စိလေး မှိတ်ရင်း သူမျက်နှာလေး ရှေ့တိုးလာတယ် ။ သူနဲ့ ကျွန်နော့် ကြား မှာ ဖဲချပ်လေးတွေနဲ့ ဖဲချပ်လေးတွေ ခင်းထားသော စောင်ပါးပါးလေး တစ်ခု သာခြားနားထားတယ်။ ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ နုတ်ခမ်းလေး စူပီး မျက်လုံးလေး မှိတ်နေတဲ့ စုမွန် ဘီယာ အရှိန်နဲ့ ရီဝေနေတဲ့ ကျွန်နော့် မျက်လုံး အသိစိတ်တွေ ပျောက်သွားမိတယ် ။ နမ်းမိတော့မလို ဖြစ်သွားပီး မှ ကျွန်တော် မနမ်းတော့ ပဲ သူ့ နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ကျွန်နော့် လက်ချောင်းလေးတွေ နဲ့ ပွတ်သပ်လိုက်မိတယ်။
တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ် ။ အိပ်ခန်းတံခါး ပိတ်ထားလို့ အခန်းထဲက သီဟ ဟောက်သံတောင် မကြားရ ။ ညနက်နက် မှာ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စုမွန်နဲ့ ကျွန်နော် ၂ ယောက်တည်း။ တဒင်္ဂ တိတ်ဆိတ်သွားချိန်နဲ့ စုမွန်နုတ်ခမ်းလေး ပေါ် ကျွန်နော့်လက်ချောင်းလေးတွေ ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ စုမွန်မျက်လုံးလေး ပွင့်လာတယ် ။ နင်အရမ်းလှတာပဲ စုမွန် ငါစိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ဘူး စကား များများပြောတတ်တဲ့စုမွန် ဘာစကားမှ ထွက်မလာပဲ နုတ်ခမ်းလေး ဟရုံသာ ပြုံးလာတယ်။ ကျွန်နော့် ကို ရီဝေတဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်နေတယ် ။ အမိုက်မှောင်ထဲ တိုးဝင်မိတော့မလား ။ မဖြစ်သေးပါဘူး ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ကို ထိန်းလိုက်ရင်း စုမွန်ပုခုံးလေး ကို တချက်ကိုင်ကာ စုမွန် ငါပြန်တော့မယ်ဟာ .. စုမွန်ထံမှ ဘာစကားမှ ထွက်မလာ ။
နက်ဖြန် စနေနေ့ နင့်ယောင်္ကျား သီဟ ဂျူတီကျတယ် မနက် နောက်မကျအောင် နိုးလိုက်ဦး ` ကျွန်နော် စုမွန်တို့ အိမ်က ထပြန်လာလိုက်တယ် ။ အိမ်တံခါးနားအထိ ဘာစကားမှ မပြောပဲ စုမွန် လိုက်ပို့တယ် ။ လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၁ နာရီတောင် ထိုးနေပီ ။ ကျွန်နော့် ဆိုင်ကယ်လေး ပေါ် တက်ခွပီး ကျွန်နော့် ရုံးရှိရာဆီသို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ။ ရင်ထဲ မှာ ဗလောင်ဆူနေတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို ရုံးရောက်တော့ ရေခဲသေတ္တာ ထဲက ရေခဲရေ ဘူး ကို မော့သောက်လိုက်တာတောင် ပျောက်မသွား … အားး စုမွန်ရယ် … ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲ ။။
မနက်သုံးနာရီလောက်ထိ ဟိုတွေးဒီတွေး ဖြင့် အိပ်မပျော် နောက်ဆုံး စုမွန်ကို မှန်းပီး တစ်ချီလောက် စိတ်ဖြေလိုက်မှ ပဲ မျက်လုံးတွေ လေးလံပီး အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ နောက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက် မှ နိုးတယ် ။ ရေမိုးချိုးပီး အပြင်ထွက်ဘို့ လုပ်ရင်း ရုံးခန်းထဲ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တော့ ဟိုကောင် သီဟ က နေ့လည်စာတောင် ဆွဲနေပီ။ ဟေ့ကောင် သီဟ ငါ အပြင် ဒိုးလိုက်ဦးမယ် ဘာမှာဦးမလဲ အေး အတော်ပဲဟ ငါ့ အိမ်တချက်ဝင်ပေးပါဦး ခုလေး ပဲ စုမွန် ထမင်းချိုင့် လာပို့ ပီး ပြန် သွားတာ အိမ်သော့ ငါ့စားပွဲပေါ် ကျန်ခဲ့လို့ အာကွာ .. မင်း အိမ်ကို တပတ်ကြီး ပတ်ရဦးမယ် ငါ ဘရိတ်ဖတ်တောင် မစားရသေးဘူး အခုဝါးတီးသွားဆွဲ မလို့ဟလုပ်ပါသယ်ရင်းရာ မင်းဆာရင် အိမ်မှာပဲ စားသွားလိုက်ပေါ့ ငါ စုမွန်ဆီ ဖုန်းဆက်ထားလိုက်မယ် ပီးရောကွာ .. ပေးသော့ ဒိုးပီ… ကျွန်နော့် ရဲ့ စီးတော်မြင့်းဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ်လေး ပေါ် တက်ခွပီး စုမွန်တို့ အိမ်ဘက် ထွက်လာလိုက်တယ် ။။
အိမ်ဝ မှာ ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်နေတဲ့ စုမွန် ကျွန်နော် လာတာ တွေ့ တော့ ပြုံးပီး ထလာတယ်။ နင်ကလဲ ကြာလိုက်တာ ဆိုင်ကယ်ဆီဝင်ဖြည့်နေလို့ဟ ဘိုက်တောင်ဆာနေပီ ဘာစားစရာရှိလဲရှိတယ် စိတ်ကြိုက်စား ကျွေးပါ့မယ်တတယ် စိတ်ကြိုက်စားရမှလား နင်က ကော ကျွေးချင်ရဲ့လား စုမွန် ဘာအထာ ပေါက်သွားသည်မသိ ကျွန်နော့် ကို စူးစူးရဲရဲ တချက်လှမ်းကြည့်တယ် ။ ပီးတော့ မှ မျက်နှာလွဲပီး ထမင်းပြောတာနော် ကောင်စုတ် ကျွန်နော် ဧည့်ခန်း မှာထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဧည့်ခန်းနဲ့ ထမင်းစားခန်းစားပွဲက တဆက်တည်း ဆိုတော့ စုမွန်ကို လှမ်းမြင်နေရတယ် ။
မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလေး နဲ့ ထမိန်အပြာရောင် ဝမ်းဆက်လေး ဝတ်ထားပီး ဆံပင်တွေကို နောက်လှန်ပီး စည်းထားတဲ့ စုမွန်။အလှတွေက အကွေ့အဝိုက် အကောင့် အရင့် တွေ့ ဖြင့်လှပနေတယ် ။နုတ်ခမ်းမှာ လဲ နုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတယ် ။ ထမိန်ကို ခပ်ကျပ်ကျပ် စည်းထားပီး ခါးတိုရင်ဖုံးလေး ဝတ်ထားတော့ တချက်တချက် ဘိုက်သားလေး က အကျီနဲ့ ထမိန်ကြား အဖွေးသားလေး ထွက်ထွက်လာတယ် ။ တင်းရင်းနေတဲ့ တင်အစုံက လည်း အောက်ခံ ပင်တီ ချုပ်ရိုးကြောင်းလေး ပေါ်နေတယ် ။ ကျွန်နော် အတွက် တကယ် ဆက်ဆီ ပါပဲ။ ထမင်းစားတော့ ကျွန်နော့် ဘေးမှာ ထိုင်ပီး စကားတွေ တတွတ်တွတ် ပြောနေတယ် ။ ဘာတွေ ပြောမှန်းသေချာမသိတော့ဘူး သူ့ ရဲ့ ရင်သားတွေ ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို လဲ သူသတိထားမိမယ် ထင်တာပဲ။
ထမင်းစားပီးတော့ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ ခန ထိုင်နေတုန်း စုမွန်က ကျွန်နော့် အတွက် အအေး တစ်ခွက် ယူလာတယ် ။ အအေးခွက်လေးကို စားပွဲပေါ်မှာ တင်တော့ အောက်ခံခွက်အစား ဖဲချပ်လေး တစ်ချပ် နဲ့ တင်ပေးထားတယ် ။ အအေး သောက်ဦး ရင်ထဲက အပူတွေ လျော့သွားအောင်လို့ ငါက ဘယ်နှယ့် ရင်ထဲက ပူရမှာတုန်း မသိဘူးလေ တချိန် လုံး ငါ့ကို ခိုးခိုးကြည့်နေပီး ရင်ထဲမှာ များ ဗလောင်ဆူပီး ပူနေလားလို့အံမယ်နင်သိနေတယ်ပေါ့ .. လှလို့ကြည့်တာပါဟာ အဲ့လို မြန်မာဆန်ဆန် ဆက်ဆီမျိုး နဲ့ နင်နဲ့ အရမ်းလိုက်တယ် နင်က ဘော်ဒီလဲ လှတယ် နုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေး ဆိုးထားတော့ ပို အသည်းယားစရာကောင်းတယ် ယောင်္ကျားတွေ တက်မတ်တဲ့
ပုံစံမျိုး လေမြှောက်ပီ.. သောက်သောက် အအေး နောက်တခွက်တိုက်မယ် အအေးပဲလား …ကျန်တာကော ..နင်က ဘာစားချင်သေးလို့လဲနင်စေတနာရှိတာ စားမှာပေါ့ ဘာကျွေးချင်လဲ စုမွန် ကျွန်နော့် မျက်နှာကို သေချာ စိုက်ကြည့်တယ် ။ စကားသံတိတ်ဆိတ်သွားတယ် ငါးမိနစ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ် ။ တစ်ခုခု ကို စဉ်းစားနေပုံမျိုး ။ ကျွန်နော် လည်း ရှေ့က အအေး ခွက်ကို ယူပီး တချိုက်သောက်ရင်း အမှတ်တမဲ့ အအေးခွက်အောက်မှာ ခံထားတဲ့ ဖဲချပ်လေး ကို လှန်ကြည့်မိတယ် “` Heart 1 တဲ့ဗျာ ဖဲချပ်လေး ကို သူ့ ရှေ့ ကို ထိုးပေးလိုက်တယ် ။ ခနနေတော့ စုမွန် မတ်တပ်ရပ်ကာ အိမ်တံခါးဆီသို့ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်သွားပီး တံခါး ဂျက်ထိုးလိုက်တယ် ။ ပီးတော့ ကျွန်နော့် ဆီ ပြန်လျောက်လာပီး ထ .. မတ်တပ်ရပ် ကျွန်နော် လည်း ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ ထရပ်လိုက်တော့ ကျွန်နော့် ကို အတင်းဖက်ပီး Kissing ဆွဲပါလေရော .. ကျွန်နော် လည်း အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းရင်း စုမွန် ခါးလေးကို ဖက်ထားလိုက်တယ် ။
ကျွန်နော့် ပုခုံး ကို ဖက်ပီး ပြင်းရှရှ အနမ်းတွေ မပြတ်ပေးနေတဲ့ စုမွန် ။သူ ယောင်္ကျား ရှိရဲ့ သူကိုယ်တိုင်လိုလားလို့လား ကျွန်နော့်ကို ပဲ စေတနာရှိလို့လားမသိ လောလော ဆယ်တော့ ကျွန်နော် အမိုက်မှောင်ထဲ ဆင်းမိလိုက်ပီ။ နမ်းနေရင်း နဲ့ပဲ စုမွန် တင်ပါးတွေကို ထမိန်ပေါ် မှ ပွတ်ချေပေးနေမိတယ် ။ စုမွန် ရင်သားတွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘက်မှာ အတင်းတွန်းကပ် ဖိမိနေတယ် ။ စုမွန်က မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားပီး ကျွန်နော် နမ်းခမ်းကိုသာ တွင်တွင်နမ်းနေတယ် ။ ခနနေတော့ နမ်းနေတာ ကို ရပ်ပီး ကျွန်နော်လည်ပင်း ကို သူ့ လက်နဲ့ ခိုတွဲကာ အခန်းထဲ ပွေးခေါ်သွားပေး နိုင်လား
ဟဟ စမ်းသလားဟ ငါဟဲ့ယောင်္ကျား ဟု စိတ်ထဲမှ တွေးကာ စုမွန် ကိုယ်လုံးလေးကို မ လိုက်တယ် ။ဒူးခေါင်းအကွေး မှာ ဘယ်ဘက်လက် ဇတ်ပိုးနားမှာ လက်တဘက် ဖြင့် ဆွဲ မလိုက်တယ် ။။ အားး တော်တော် လေးတာပဲ ။ စုမွန်က ကျွန်တော့ ကို ပြုံးသလိုလို ရယ်သလိုလို ဖြင့်ကြည့်နေရင်း ကျွန်နော့် လည်ပင်း မှာ လက်နှဖက် တွဲ ခိုထားတယ် ။ စုမွန်ကို ပွေ့ချီ ပီး သူတို့ လင်မယား အိပ်တဲ့ အခန်းထဲက စပရိန်မွေ့ယာကြီး ဆီပေါ် အသာချပေးလိုက်တယ် ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး မြန်မာဝတ်စုံလေး ဖြင့် နုတ်ခမ်းနီလေးတွေက နဲနဲ ပျက်ပြယ်သွားပီ ။
ကျွန်နော် စုမွန် အလှ ကို ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကြည့်နေမိတယ် ဟဲ့ .. ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်နေမှာလား နင်လိုချင်တာယူလေ ငါပေးဘို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပီ ကျွန်နော် အကျီ နဲ့ ဘောင်းဘီ ကို ချွတ်လိုက်တယ် ကျွန်နော့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး သာ ကျန်တော့တယ် ။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထဲမှာ ကျွန်နော် ကောင် က ရုန်းကန်ထွက်နေပီ ဖောင်းကားပီး အပြင်ကို တိုးထွက်ချင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် စီတီ ဘောင်းဘီပေါ် ကို စုမွန်က လက်ကလေး ဖြင့်လှမ်းပွတ်ပေးတယ် ။ စုမွန်သေချာ လက်လှမ်းမှီအောင် သူ့ အနား ကို တိုးပေးလိုက်တော့ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေး ထဲ လက်နှိုက်ပီး အောက်ကို ဆွဲ ချွတ်ချလိုက်တယ် အားပါးးးး နင်လည်း တော်တော် ထွားတာပဲ မကြိုက်ဘူးလား
ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ နင့် အရည်အချင်းပေါ် မူတည်တယ်လေ စုမွန်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ စိန်ခေါ်ပီလေ ။ ကျွန်နော့် လီးက တောင်နေတဲ့ အချိန် ဆို ခြောက်လက်မ ကျော်ကျော် ရှိတယ် ။ လုံးပါတ်တုတ်တယ် ။ ကျွန်နော့်လီး ပေါ် လက်ကလေး တင်ပီး ပွတ်ပေးနေတဲ့ စုမွန် ကို ခေါင်းကနေ အသာလေး မ ပီး လီး နား တိုးပေးလိုက်တယ်။ နုတ်ခမ်း သားလေး ကို ကျွန်နော့်လက်ကလေး နဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တော့ စုမွန်က အလိုက်သိစွာပဲ ကျွန်နော့် ဒစ်ဖူးလေး ကို သူ့ နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ဖြင့် လာတို့တယ် ။ အိမ်ထောင်သည်ပဲ ဒီလောက်တော့ သေချာ ပြောစရာမလို ။ သိပီးသားပဲလေ ။ ဒါကြောင့်လည်း တွင်းဟောင်းရေကြည်အေးမြသည် ဆိုပီး ဖြစ်လာတာ ပေါ့။ အခု ဆို စုမွန်က ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျှက်သား ကျွန်နော်က ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ။ ကျွန်နော် သာ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပီး ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေတာ စုမွန်က အဝတ်တွေ အကုန် မချွတ်ရသေး ။
ကျွန်နော် တမင် မချွတ်သေးတာ မြန်မာဆန်ဆန် အဝတ် အစားလေး ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ကျွန်နော့် လီး ကို စုပ်ပေးတာ ကို ကြည့်ချင်တယ် အရသာခံချင်တယ် လေ။ ကျွန်နော့် လီး နဲ့ စုမွန် နုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို နုတ်ခမ်းနီဆိုးပေးသလို ပွတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ဒစ်ထိပ် က အရည်ကြည် လေး နဲနဲ ထွက်လာပီး စုမွန် နုတ်ခမ်း ပေါ် မှာ စိုသွားတယ် ။ ခနနေတော့ စုမွန် နုတ်ခမ်းလေး ဟလာပီး ကျွန်တော့ လီးဒစ် တလျောက် ကို ငုံခဲ့ပီး အထဲမှာ လျှာ ဖြင့် ရစ်သိုင်း စုပ်ပေးတော့တယ် ။ လက်တဘက်က လီးချောင်း ကို ကိုင်ရင်း နောက်တဘက်က ဂွေးဥတွေ ကို အသာပွတ်ဆွဲရင်း လီးဒစ် ကို ငုံခဲပီး လျှာ နဲ့ ကစားတော့တယ်
အားးးး စုမွန် ကောင်းလိုက်တာ နင် သီဟ ကို အမြဲ စုပ်ပေးနေကျ ထင်တယ် ဖျန်း ခနဲ ဆို ကျွန်နော့် တင်ပါး ကို ရိုက်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲ မှ လီးဒစ် ကို ထုတ်ကာ လောလောဆယ် နင်နဲ့ ငါ့ အကြောင်းပဲ တွေး ကျန်တာတွေ မပြောနဲ့ လို့ ပြောပီး ကျွန်နော့် လီးဒစ်ပေါ် တံတွေး တချက်ထွေးကာ လက်ဖြင့် ဂွင်းထုပေးတယ်။ ကျွန်နော့် လီး တစ်ချောင်း လုံး စုမွန် တံတွေးတွေ ဖြင့် ရွဲပြောင် နေတယ် ။ ကျွန်နော် စုမွန် ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ကျွန်နော့် လီးကို သူ့ နုတ်ခမ်းနား ပြန်တေ့ပေးလိုက်တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဒီတခါ လီးဒစ် ထိပ်တင် မဟုတ်တော့ပဲ လီး တစ်ချောင်းလုံးကိုပါးစပ်ထဲ ထည့်ပီး လွှေတော့တယ် အားးးး ကောင်းတယ် စုမွန် …အားးး စုပ်စုပ် စုမွန် ခေါင်းကို ကိုင်ပီး ကျွန်နော် စုမွန်ပါးစပ် ကို စောက်ဖုတ်လိုးသလို စောင့်စောင့် လိုးပေးနေမိတယ် ။
စုမွန် ရဲ့ စုပ် ချက်တွေက လည်း တဖြည်းဖြည်း ကြမ်းလာတယ် ။ တချက်တချက် လီး က အဆုံးထိ ဝင်သွားပီး ဟိုးး အာခေါင်ထဲက အာသီးခေါင်းနား ထိ သွားသွားထောက်တယ် ။ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်စုပ်ပေးပီး စုမွန် ပါးစပ်ထဲက လီး ကို ဆွဲ ထုတ်လိုက်တယ် ။ လီးတစ်ချောင်း လုံး စုမွန်သရေတွေ ပေပွလို့ ။လီးကြီးကလည်း တစပ်စပ် တုန်နေတယ် ။ စုမွန် အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်တော့ နင် အဝတ်တွေ ချွတ်နေတာ ကို ကြည့်ဖူးချင်တယ်
အင်းးး စုမွန်က ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းပီး ကျွန်နော် က ကုတင်ပေါ် မှာ ထိုင်လိုက်ရင်း လီးကို လက်တဘက်ဖြင့် ဂွင်း သာသာ တိုက်နေလိုက်တယ် ။ စုမွန်က အရင်ဆုံး ရင်ဖုံး အကျီ ကြယ်သီးလေး တွေဖြုတ်တယ် ပီးတော့ ရင်ဖုံး အကျီ ကို ခွာချလိုက်တော့ အတွင်း မှ အပြာနုရောင်ဘော်လီလေး ထွက်လာတယ် ။တင်းရင်းနေတဲ့ နို့အုံကြီး က ဘော်လီကြားမှ လျံကျချင်သယောင်ယောင် ။ ပီးတော့ ကျွန်နော့် ဘက်ကို ကျောပေးကာ ထမိန် အထက်ဆင်စ လေး ကို ဖြေပီး ထမိန် အပြာရောင်လေး အား ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်တယ် ။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက လီး ကို ပိုတောင်လာစေမိတယ် ။ အပြာနုရောင် ပင်တီလေး ပဲ ဝတ်ထားတယ် အပေါ် အောက် ဝမ်းဆက်။ တင်သားကြီး တွေက ပင်တီ အပြာနုရောင်လေး အောက်မှာ တင်းတင်း ရင်းရင်း ။ အရမ်း မတုတ်သော ခါးလေး ရဲ့အောက်မှာ တင်သားတွေ က နောက်ဖက်ကိုပါ ကော့နေတယ်။
ဘော်လီ ချိတ်လေး ကို လက်နောက်ပြန် ပီး ဖြုတ်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ ပင်တီလေး ကို မျော့ကြိုးလေးမှ ဆွဲ ကာ အောက်ကို လိပ်ချွတ်လိုက်တော့ ဖင်ကုန်းသလို ဖြစ်သွားပီး နောက်ဘက်ကို စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူထွက်လာတယ် ။ ပီးတော့ မတ်မတ် ပြန်ရပ်ရင်း ကျွန်နော် ဘက်ကို လည်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ် ။ မန္တလေး သူ စုမွန်ရဲ့ စကိုင်းအိုးဂစ်တာ ရှိတ်ကြီးက ကျွန်နော့် လီး ကို ပိုတောင်စေတယ် ။ကျွန်နော့် လက်တဘက်က လီးကို ကိုင်ထားရင်း ညာဘက်လက်နဲ့ သူ့တင်ပါး ကို လှမ်းကိုင်တော့ ကျွန်နော် မှီအောင် နောက်ကို တလှမ်း ဆုတ်ပေးတယ် ။ တင်ပါးမှာ မွှေးညှင်းလေး တွေ ပေါက်နေတာ သေချာကြည့်မှမြင်ရနိုင်ပီး တချို့ နေရာလေးတွေမှာ တင်ပါးကြောလေး တွေ ပြတ်နေတာတွေ့လိုက်တယ် ။ စုမွန်ရယ် လှလိုက်တာ တလုံးတခဲကြီးပဲကွာ ကြိုက်တယ် နင်ကျေနပ်အောင်နေပေးမယ် ငါကိုလည်း ကျေနပ်အောင် နေပေးရမယ်နော် အင်း စိတ်ချ ..
ကျွန်နော့်ဘက်ကို လှည့်လာကာ ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်တွဲလောင်းချထိုင်ထားတဲ့ ကျွန်နော့် ပေါင်ပေါ် သူ့ တင်ပါးကြီး နဲက တက်ထိုင်တယ် ။ ကျွန်နော့် လည်ပင်း ကို အသာ လာဖက်ပီး ကျွန်နော့်လီး ကို စုပ်ထားလို့ စိုစိစိ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့နုတ်ခမ်းနဲ့ ကျွန်နော့် နုတ်ခမ်းတွေ ကို လာနမ်းတော့တယ် ။ မန်းမြို့တော် ပေါက်စီ ထက်ကြီး သော သူ့ နို့အုံကြီးတွေ ထိပ်က ညို မဲမဲ နို့သီးခေါင်းက မကြီးမသေး ။နို့သီးခေါင်း ဘေးမှာ အမွေးလေး နှစ်မျှင်သုံးမျှင်လောက် နှစ်ဘက်လုံးပေါက်နေတာတွေ့လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လည်ပင်း ကို ဖက်ထားတဲ့ လက်တဘက်က အောက်ကို ရောက်လာပီး ကျွန်နော့် လီး ကို ပွတ်ကိုင်ပေးနေတော့တယ် ။
အခုအချိန် ထိ စုမွန် စောက်ဖုတ်ကို ကျွန်နော် မကိုင်ရသေးဘူး ။ နို့ အုံကြီးတွေ ကို နယ်နေတဲ့ ကျွန်နော့် လက်တဘက်ကို အောက်လျောဆင်းကာ စုမွန် ပေါင်သားလေးတွေ က နေ တဆင့် ဖြေးဖြေး ချင် ပွတ်ရင်း နောက်ဆုံးပန်းတိုင်နေရာ ကို သွားလိုက်တယ် ။ စုမွန်က ပေါင်လေး အသာ ဟပေးလိုက်တော့ သူ့စောက်ဖုတ်နေရာလေး ကို စမ်းမိသွားတယ် ။ အခုမှ သိလိုက်တာ စုမွန် စောက်ဖုတ်မွှေးတွေ ရိတ်ထားတာပဲ ။ အမွှေးအမျှင် တပင်မှ မရှိ။ အဖုတ် အပေါ်သားလေးတွေကို ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ကျွန်နော်တို့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပီး ကာစ လေး လို ဖြစ်နေတယ် ။
စောက်ဖုတ်မှာ အရည်တွေ တော်တော် စို့ နေပီ ။ သူလည်း တော်တော် စိတ်ပါနေပုံ ရတယ် ။ စုမွန်က ကျွန်နော့် ပေါင်ပေါ် ဘေးတဇောင်း ထိုင်နေရမှာ ထလိုက်ပီး ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် အပေါ်မှာ ခွပီး ထိုင်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးချောင်းကြီးက ဘိုက်ပေါ် အလျားလိုက် လန်တင်သွားပီး သူ့စောက်ဖုတ်ကြီး ဖြင့် အပြားလိုက် ဖိထားသလို ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်နော့်လက် နှစ်ဘက်က သူတင်ပါး တဘက်စီပေါ် ကျရောက်နေပီး ပွတ်ချေနေတယ် ။ စုမွန်က သူ့ ခါးကို အားပြုကာ ကျွန်နော့် လီးချောင်းကြီး ကို သူ့ စောက်ဖုတ် ဖြင့် အလျားလိုက် အထက်အောက်စုန်ဆန် ပွတ်ဆွဲရင်း သူ့နို့သီးတွေကို သူပြန်ကိုင်ထားတယ် ။
အင်းးးအားးး ကောင်းတယ် အားးး ကျီ..ကျီ ကျွီးး. စပရိတ်မွှေ့ယာ ကုတင်ကြီးမှ လည်း တကျီကျွီ အသံတွေ ထွက်လာတယ် ။ စုမွန်ရဲ့ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်း ကိုကြားနေရတယ် ။ ကျွန်နော် တို့ ရာဂ စိတ်တွေ အထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်နေပီ ။ တင်ပါးတွေကို ပွတ်ရင်း လက်ခလယ်လေး ဖြင့် တင်ပါး အကွဲကြောင်းထဲသွားကာ ပွတ်ဆွဲ ပီတော့ ခပ်ရှုံ့ရှုံ့ စအိုပေါက်လေး ကို စမ်းမိတယ် အားးး ကောင်းတယ်ကွာ…အားးး စုမွန် အရမ်း ကောင်းနေပီ ဒါတောင် အဖုတ်ထဲ လီး မသွင်းရသေးပဲ အဖုတ်နဲ့ လီး ပွတ်နေခြင်းသာ ရှိသေးတယ် ။ တင်ပါး အကွဲကြောင်း တလျောက် ပွတ်ဆွဲ ပေးနေရာမှ ကျွန်နော် မချင့်မရဲ ဖြစ်လာပီး နောက်လက်တဘက်ဖြင့် စုမွန် တင်ပါးဆုံကြီး ကို ရိုက်လိုက်မိတယ် ဖျန်းးးး အားးးး …ဟုတ်တယ်ကွာ … အဲ့လို ကြိုက်တယ် ကိုရယ် စုမွန်ထံ မှ ညီးတွားသံတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်လာတယ်
အားးးးကြိုက်တယ်ကို ..အားးး ဖျန်းးးး ဖျန်းးးးးးဖျန်းးးးး `အားးး ကောင်းတယ် ကို… စုမွန် စိတ်တအား ပါနေပီကွာ …အားးးး ဖျန်းးးး ဖျန်းးးးးးဖျန်းးးးး အားးး အားးး ကို အားးးးးကောင်းတယ်ကွယ် စုမွန် ကိုယ်လုံး ကို ဖက်ပီး တပတ်လှည့် ကာ စုမွန် ကိုကုတင်ပေါ် ပက်လက် အနေအထား ထားလိုက်ပီး ကျွန်နော် က ကုတင်အောက် မှ ဒူးကို အနည်းငယ် ကွေးပီး စုမွန် စောက်ဖုတ် အ၀ မှာ လီးဒစ် ကို တေ့လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးတံမှာ စုမွန်ရဲ့ အဖုတ် အရည်တွေ ဖြင့် လီးတစ်ချောင်းလုံး ချောပြောင်နေတယ် ။ အမွှေးတွေ ရိတ်ထားတဲ့ စုမွန် စောက်ပတ်လေး မှာ အကွဲကြောင်းလေးအထက်နားက အစိလေး ကို ပါသေချာ မြင်နေရတယ် ။ ဘေးမှ အဖတ်လေး နှစ်ဖတ် နဲနဲ ပြဲအာ သယောင် ဖြစ်နေတယ် ။ အဖုတ်ဝ မှ အရည်ကြည်လေး တွေ လည်း ထွက်လို့။ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပီး ကျွန်နော့် လီး ဝင်လာမယ် အချိန် ကိုမှန်းမျှော်နေတဲ့ စုမွန် ကို ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကို အသာ ဆွဲမ ကာ ကျွန်နော် ပုခုံး တဘက်တချက် ပေါ် တင်လိုက်တယ်။
သွင်းလိုက်တော့ကွာ စုမွန် လိုချင်နေပီ ဆိုပီး ကျွန်နော့် လီးချောင်း ကို လှမ်းကိုင်ကာ သူ့အဖုတ် အ၀ တဲ့တဲ့ မှာ နှဲ့ ပေးလိုက်ချိန် ကျွန်နော်လည်း ခန္ဒာကိုယ် ကို အောက်သို့ ဖိချလိုက်တယ် ပလွတ် …ဘွတ် .. အားးးး ဟုတ်တယ်ကွာ ..အားး ကိုရယ် ဇွတ် ဇွတ် ဇွပ် … ဘွတ် .. အားကောင်းတယ် ကို ဖိစောင့်ပေး အားးး ပက်လက်လှန်လျှက်မှ ခေါင်းထောင်လာပီး သူလက်နှစ်ဘက် ဖြင့် ကျွန်နော့် ခါးကို လှမ်းကိုင်ကာ စောင့်ခိုင်းတော့တယ် ။ စုမွန်စောက်ပတ် က သိပ်မကြပ်တော့ပါ ။ အိမ်ထောင်သည် မို့ နဲနဲ တော့ ချောင်နေသည် ။ ချောင်နေသည် ဆိုတာထက် စုမွန် စောက်ရည်တွေ ထွက်နေတော့ အဝင်အထွက်က ချောချောချူချူ ဖြစ်နေတာလဲပါတယ် ။ အားးး စုမွန် ကို ကိုယ်လိုးနေပီးနော် အားးး ကောင်းရဲ့လားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ကုတင်အောက်ကနေ ဒူးကွေးထားရသည်မို့ သိပ် အားမပါလှ ။ စုမွန်က ကုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်လှန် အနေအထား ဖြစ်သဖြင့် အောက်ကို နဲနဲ နိမ့်နေသည်။ ကျွန်နော်လည်း စုမွန်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ပုခုံးပေါ် တင်ကာ အောက်သို့ ဖိဖိချရင်လိုးပေးနေတယ် ။ စုမွန် ရဲ့ နို့ အုံတွေ ကို လည်း မှီသလောက်လှမ်းလှမ်းပီး လိုးနေရင်း စို့ပေးဖြစ်တယ် ။
အားး ကောင်းတယ်ကို …အားးးး အားး စုမွန် ကိုယ် ညောင်းလာပီကွာ ကိုယ့်ကို လေးဘက်ကုန်းပေးပါလား ကိုယ် ကုတင်အောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပီး လုပ်ချင်တယ် အင်းးးးကုန်းပေးမယ်နော် စုမွန်ကို ကောင်းအောင် လိုးပေး ပက်လက်လှန်နေရာ မှ ထကာ စုမွန်က ကုတင်စောင်း မှာ လေးဘက်ထောက် ကုန်းလိုက်တယ် ။ အားး မိုက်တယ် .. ဘေးဘက်ကုန်းလိုက်တော့ စုမွန် ဖင်ကြီး က ပိုပီး ကားထွက်လာတယ် ။ စုမွန် ဖင်ကြီး တွေကို လက်နှစ်ဘက် ဖြင့် ပွတ်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် လီးတံကို ကိုင်ကာ အဖုတ် ၀ မှာ လေးငါးချက် ဆွဲ ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် အားးး စုမွန် ခါးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲ လီးကို စောင့်ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ ကုတင်စောင်း မှာ လေးဘက်ကုန်းပေးထားတဲက အတွက် ကျွန်နော်က ကုတင်အောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ထားတာက စုမွန် အဖုတ်နဲ့ ကျွန်နော့်လီးတံ တတန်းထဲ ဖြစ်နေတယ် ။ဒူးကွေးစရာ မလိုတော့ ပိုပီး အားရပါးရ စောင့်လို့ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားတယ် ။
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် အားးအားးး ရှီးးးးး အားးးး ဘွတ်ဘွတ် ဘွတ် အားးး ကောင်းတယ် ကို စောင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စောင့်ပေး အင်းး ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ် အားးး ရော့ကွာ အားးး ကျွန်နော့် စောင့်ချက်တွေက ပိုပိုပြင်းထန်လာတယ် ။ ကျွန်နော် စုမွန်ရဲ့ နောက်ကို စုပီး စည်းထားတဲ့ ဆံပင်တွေ ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ် ။လေးဘက်ကုန်းရင်း ခေါင်းက အောက်ကို ငိုက်စိုက်ကျနေရာမှ စုမွန် ခေါင်းက နောက်ကို လန်ပီး ထောင်လာတယ် ။
မြင်းတစ်ကောင်ကို ဇတ်ကြိုးကိုင်ပီး စီးနေရသလို ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားတယ် ။ အင့် အင့် အင့် အင့် ..အားးအားး ဖတ် ဖတ် ဖတ် `ကျွီ ..ကျွီ ..ကျွီ အားးးအားးး ကောင်းတယ်ကို စောင့်ပေး လီး အဆုံးထိ စောင့်ထည့်ပေး အားးးဖျန်းးးးးဖျန်းးးး စုမွန် တင်ပါးကြီးတွေကို နှစ်ချက်ဆင့်ပီး ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် တင်ပါးမှာ နီရဲရဲ လက်ချောင်းရာများပင် ပေါ် လာတယ် ။ အားးးး ကြိုက်တယ်ကွာ… အဲ့လိုမျိုး ကိုကြိုက်တာ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် အသံမျိုးစုံ ထွက်ပေါ်ကာ အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေတယ် ။ စုမွန် ကလည်း လေးဘက်ကုန်းထားရာမှာ နောက်ကို သူ့တင်ပါးကြီး ဖြင့် ပြန်ပြန် စောင့်ပေးနေတယ် ။
အားးး ကောင်းတယ်ကွာ စုမွန် ကို ကြမ်းပေး ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးပေးတာ ခံချင်တယ်ကွာ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဖျန်းးးးဖျန်းးးးဖျန်းးးးးအားးး ကောင်းတယ် ….ရိုက်ပါ စုမွန်ကို ရိုက်ပါ အားးးဖျန်းးးးဖျန်းးးဖျန်း စုမွန် တင်ပါးကြီးတွေရဲစပ်နေပီ ကျွန်တော့် ရိုက်ချက်တွေက လည်း ပြင်းလာသလို ကျွန်နော့် လီးဖြင့်စောင့်ချက်တွေကလည်း သွက်လာတယ် ။ ကျွန်နော် စုမွန် စက်ပတ် အတွင်း မှ လီး တံကို ချွတ်ကာ ကုတင်အောက် မှာ ဒူးထောက်လိုက်တယ် ။
ကျွန်နော့် မျက်နှာ နဲ့ စုမွန် စောက်ဖုတ် နဲ့ တန်းနေတဲ့ အနေအထား ရောက်သွားတယ် ။ စောက်ရည်တွေ ထွက်နေတာ ပေါင်ကိုတောင် စီးကျနေပီ ။ ဖင်နှစ်ခြင်းကြားမှ စအိုဝ မဲမဲ လေး ကို လည်း မပေါ်တပေါ် တွေ့လိုက်တယ် ။ ဖင်နှစ်ခြမ်း ကြီးမား တာကြောင့် စအိုဝ က ကြားမှာ သိပ်မပေါ်လှ ။ စောက်ပတ် မှာ လိုးထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ပြဲအာ နေတာ စောက်ခေါင်းသား နီရဲရဲ ကိုပါလှမ်းမြင်နေရတယ် ။ ကျွန်နော့် လျှာ ကို ရှေ့ ထုတ်လိုက်ပီး စောက်ဖုတ် တပြင်လုံး ကို လှမ်းယက်လိုက်တယ် ။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှာ ကျွန်နော့် နှာခေါင်းက မြုပ်ဝင်နေပီး ညှီစို့စို့ အနံတခု ရနေတယ် ။
စောက်ဖုတ်ရည် ဖန်ကျိကျိ အရသာ က ကျွန်နော့် လျှာ ဖျား မှ ထိတွေ့ နေပီး နွေးနေတယ် ။ကျွန်နော် စောက်ဖုတ် ကို လှမ်းယက်လိုက် စောက်ခေါင်း ထဲ ကို လက်ညိူးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်း ပူးပီး ထုတ်သွင်းလုပ်ပေးလိုက် လုပ်ပေးနေလိုက်တယ် အားးး ကောင်းတယ် ကို ယက်စမ်းပါ စုမွန် စောက်ပတ်ကြီး ကို ယက်ပစ်စမ်းပါ .. စုမွန် နုတ်မှ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားတွေ ထွက်လာတယ် သူ အရမ်းဖီလ်း တက်နေမှန်း သိသာတယ်။ဖင်ကြီးတဲ့ သူတွေ ရာဂ ကြီးတယ် ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ် ။ တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေး တွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလိုးခံရတာကို လည်း နှစ်သက်ကြတယ် ။
စုမွန် စောက်ပတ်ကြီး ကို အထက်အောက် စုန်ဆန် ယက်ပေးနေတာ တချက်တချက် ဖင်ဝမဲမဲ လေးကို လဲ လျှာဖျားလေး နဲ့ ထောက်ထောက်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖင်ဝ ကို လျှာဖျားလေး နဲ့ ထိလိုက်တိုင်း စုမွန် တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားတာ သတိထားမိတယ် ။ ဖင်ဝ ကို အယက်ခံရတာ ကို ကြိုက်ပုံရတယ် ။ တအင်းအင်း နှင့်ညီးညူရင်း ဖင်ကြီးက နောက်ဘက်ကို ကော့ကော့ လာတယ်။ ငါးမိနစ်လောက် ယက်ပေးပီးကျွန်နော် မတ်တပ်ပြန်ရပ်လိုက်ပီး အဖုတ်ဝ မှာ လီး ကို ပြန်တေ့ထားလိုက်တယ် ။ စုမွန် နောက်ပြန်စောင့်ပေးအင်းးး ကျွန်နော့် လီး ကို သူ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းအောက်မှ လှမ်းကိုင်ပီး အဖုတ်အ၀ ကိုလီးဒစ် လှမ်းသွင်းတယ် ။ ပီးတော့ တင်ပါးကြီး ကို နောက်ပြန်စောင့်လိုက်ရာ ပလွတ် ခနဲ လီးတဝက်လောက် အဖုတ်ထဲ ဝင်သွားတော့တယ် ။
ဖင်ကြီး ကို နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် လုပ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီး ကို မွှေမွှေပေးလိုက် နောက်ပြန်စောင့်လိုက်ဖြင့်လုပ်ပေးနေရာ ကျွန်နော်က လက်နှစ်ဘက်ကို ခါးမှာ ထောက်ကာ လီးကို ရှေ့ ကော့ပေးထားရင်း ဇိမ်ယူနေမိတယ်။ အ အားးး စောင့်စမ်းပါစုမွန်ရဲ့ အားး ခပ်သွက်သွက်စောင့်ပေးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် စုမွန်က ရှေ့က နေ စောင့်နေရတော့ သိပ်အားမပါလှ ။ စုမွန် ထကွာ မတ်တပ်ရပ် နံရံမှာ လက်ထောက်ပီး ဖင်ကော့ပေးထား ကို မတ်တပ်ရပ်ပီး လိုးပေးချင်တယ် အင်းး စိတ်ကြိုက်လုပ် လုပ်ပေးမယ် ကျွန်နော့် အကြိုက်ဆုံး ပိုဇေရှင်ပါ။ မတ်တပ်ရပ် နံရံ မှာ လက်ထောက်ပီး ဖင်ကော့ပေးထားချိန် နောက်က နေ အားရပါးရ စောင့်ရတာ ကို ကျွန်နော် အကြိုက်ဆုံးပဲ ။
အဲ့လို ပိုဇေရှင်က စုမွန်လို ဖင်ကြီးတဲ့ သူတွေကို လိုးရမှ ပိုကောင်းတယ် ပို အဆင်ပြေတယ်။ စုမွန်က ကျွန်နော် လိုချင်တဲ့ ပိုဇေရှင် အတိုင်းနေပီး မျက်နှာကို ခငြေ်္သ့လည်ပြန်လှည့်ကြည်တယ် ။ လက်တဘက်ကို နံရံမှ ခွာကာ သူ့တင်ပါး ကို တဖတ်ဖတ် ရိုက်ပြရင်း မျက်စိတဖက် မှိတ်ပြလိုက်သေးတယ် ။ ကျွန်နော် အသည်းတွေ ယားလာတယ်။ ကြိုက်လားးးစုမွန်အိုးကို …အိုးလေး ကွဲသွားအောင် မလုပ်နဲ့နော်တဲ့လေ ..ကြည့်စမ်း လူကို ဘယ်လောက်ထိ ကလိတိတိ ပြောတတ်လဲ ဆိုတာ ။ ကျွန်နော် စုမွန် ရဲ့ နောက်မှာ နေရာ ယူလိုက်တယ် စုမွန်က ကျွန်နော့် ထက် အရပ် နဲနဲ ပုတာမို့ ဒူးကို အနည်းငယ်ကွေးလိုက်ပီး စောက်ပတ် အ၀ မှာ လီးတေ့လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ တင်ပါး နှစ်ဘက် ကို ကိုင်ကာ လီးကို အဆုံးထိ ဖိသွင်းပစ်လိုက်တယ် ဘွတ်…အားးးး လက်တဘက်က ပေါင်ကြားထဲကို လျှို ဝင်လိုက်ပီး စုမွန် စောက်စိကိုပွတ်ပေးရင် နောက်ကနေ အားရပါးရ လိုးခွဲနေမိတယ်။
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားးး ကောင်းတယ်ကို အားးး စောင့်ပါ အားးး ရော့ကွာ အင့် အင့် အင့် ဖွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် စုမွန် ဖင်ကြီး တွေကို ရိုက်လိုက် နောက်ကနေ စောင့်လိုးလိုက် အစိကို ပွတ်ပေးလိုက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ပေးနေတာ စုမွန်ကလဲ ရှေ့ကနေ ပြန်စောင့် ဖြင့် နှစ်ယောက်သား အပေးအယူ မျှနေကြတယ်။ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် ဆက်တိုက် စောင့်ပီးချိန်မှာ ကျွန်နော့် လီးတံ ထဲ ကျဉ်သလိုလို ဖြစ်လာပီး ပီးချင်လာတယ် အချိန်ကိုက်ဆိုသလိုပဲ စုမွန်ကလဲ ကို ..စုမွန် ပီးတော့မယ် …အားးးအားးးအင်း ကိုလဲ ပီးတော့မယ် အရည်တွေ ထည့်လိုက်မယ်နော် အင်းးးအင်းးး ထည့်လိုက် စက်ပတ် ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ အားးးအ …အ… အားးး ထွက်ကုန်ပီ အားးးးးအားးး စုမွန်လည်း ထွက်ကုန်ပီ အားးးး အားးးး“ စုမွန်ရော ကျွန်နော် ရော ပြိုင်တူ ပီး သွားပီး အားအင် ကုန်ခန်းကာ ဒူးခေါင်းတွေ ညွတ်ကျလာပီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ခွေခွေလေး နှစ်ယောက်သား ကျသွားတယ် ။ ကျွန်နော့် လီးတံ မှာ လည်း အရည်တွေ ရွဲစိုနေပီး စုမွန် အဖုတ်ဝမှ လည်း အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် အံကျလာတော့တယ်……. ပီး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရှမျးကိုးမီး